3001s &quot;Kutenda Kunobata Matambudziko&quot; naPastor Rick Warren images and subtitles
- Mhoroi munhu wese, ini ndiRick Warren, Mufundisi paSaddleback Church uye munyori ye "Icho Chinangwa Chakatengeswa Hupenyu" uye mutauri pane ye "Zuva Nezuva Tariro" chirongwa. Maita basa nekutepfenyura. Iwe unoziva, vhiki ino pano muOrange County, California, hurumende yakazivisa kuti ivo vari kurambidza Misangano yose yemhando ipi neipi, yezve chero saizi kusvika pakupera kwemwedzi. Saka tinogamuchirwa kuCaddleback Church mumusha. Ndiri kufara kuti mave pano. Uye ini ndiri kuzokudzidzisa iwe nevhidhiyo pakati pezvino uye chero nguva iyi dambudziko reCOVID-19 rinopera. Saka tinogamuchirwa kuCaddleback Church mumusha. Uye ndinoda kukukoka kuti unditevere vhiki yega yega, kuve chikamu cheminamato iyi yekunamata pamwe chete. Tichava nemimhanzi uye tinamate pamwechete, uye ndinenge ndichiendesa izwi kubva muIzwi raMwari. Iwe unoziva, sezvandaifunga pamusoro peizvi, nenzira, kutanga ini ndinofanira kukuudza. Ndakafunga kuti ivo vaizotitadzisa kusangana. Uye saka vhiki ino, ini ndanga ndine iyo Saddleback studio ndakaenda kugaraji kwangu. Ndiri kunyatsopaka izvi mugaraji mangu. Yangu skeletal tech vashandi. Huya upinde, vakomana, uti wani kune wese munhu. (anoseka) Ivo vakabatsira kuifambisa pamusoro apa uye kuisa iyo kumusoro kuitira kuti tigone kutaura newe pasvondo. Zvino, sezvandaifunga pamusoro pezvatinofanira kufukidza pakati peiyi COVID-19 dambudziko, Ndakabva ndangofunga bhuku raJames. Bhuku raJakobho ibhuku diki chaizvo pedyo nekuguma kweTestamente Itsva. Asi zvinoshanda uye zvinobatsira kwazvo, uye ndinodaidza bhuku iri kutenda uko kunoshanda kana hupenyu husinoshanda. Uye ndakafunga kana paine chero chinhu chinodiwa izvozvi, isu tinoda here kutenda kunoshanda kana hupenyu husingaite. Nekuti haisi kushanda zvakanaka izvozvi. Uye saka nhasi, vhiki rino, tiri kutanga rwendo pamwechete urwo kukukurudzira kubudikidza nedambudziko iri. Uye ini handidi kuti iwe upotsa chero yeiyi mameseji. Nekuti bhuku raJakobho rinonyatsoverenga gumi nemaviri zvivakwa zvehupenyu, 14 nyaya dzakakosha dzehupenyu, 14 nzvimbo idzo yega yega yako ndatova nechekuita neupenyu hwako, uye uchafanirwa kubata mune ramangwana. Semuenzaniso, muchitsauko chimwe chaJames, rega ndimbokupa chidimbu chidiki chebhuku racho. Ingori zvitsauko zvina. Chitsauko chekutanga, chinotanga kutaura nezvekuomerwa. Uye isu tiri kuzotaura nezvazvo nhasi. Chii chinangwa chaMwari pamatambudziko ako? Ipapo inotaura pamusoro pesarudzo. Unoita sei pfungwa dzako? Unoziva sei nguva yekugara, yekuenda? Unoziva sei zvekuita, unoita sei sarudzo? Uyezve inotaura nezvemuedzo. Uye isu tichatarisa kuti unokunda sei miedzo inowanzoitika muhupenyu hwako zvinoita senge zvichiramba zvichikuita kuti utadze. Uyezve inotaura nezve kutungamira. Uye inotaura pamusoro patingaropafadza sei Bhaibheri. Kwete kungoverenga chete, asi kukomborerwe nazvo. Izvi ndizvo zvese muchitsauko chekutanga. Uye isu tichatarisa kune avo mumavhiki anotevera. Chitsauko chechipiri chinotaura nezvehukama. Tiri kutarisa kuti unoita sei vanhu zvakanaka. Uye nevanhu vanofanirwa kugara pamba, vese mumhuri pamwe chete, vanaamai naamai nanababa, uye vanhu vanozosvika panjodzi dzeumwe neumwe. Ndiko kunenge kuri meseji yakakosha pahukama. Ipapo chinotaura nezvekutenda. Unotenda sei Mwari kana usinga farire zvakadaro? uye kana zvinhu zvaenda nenzira isiriyo? Izvi ndizvo zvese muchitsauko chechipiri. Chitsauko chechitatu, isu tiri kuzotaura nezvekukurukurirana. Simba rekutaura. Uye ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvakakosha mubhaibheri mune sei akabata muromo wako. Izvo zvakakosha kana tiri munyatwa kana kwete. Uyezve inotaura nezvehushamwari. Uye inotipa ruzivo runoshanda chaizvo paunoita sei kuvaka huchenjeri hushamwari uye dzivisa ushamwari husina kuchenjera. Icho chitsauko chechitatu. Chitsauko chechina chiri pakupokana. Uye muchitsauko chechina, tinotaura nezvazvo unodzivirira sei kupokana Uye izvozvo zvichabatsira chaizvo. Sezvo kukakavara kuchimuka uye kushungurudzika kuchikura, Sezvo vanhu vari kubva kubasa, iwe unodzivisa sei kupokana? Uyezve inotaura nezve kutonga vamwe. Iwe unorega sei kutamba Mwari? Izvo zvaizokonzeresa rugare rwakawanda muhupenyu hwedu kana isu taigona kuzviita. Uyezve inotaura nezveramangwana. Unoronga sei ramangwana? Izvo chete zviri muchitsauko chechina. Zvino, muchitsauko chekupedzisira, chitsauko chechishanu, ndakakuudza pakanga paine zvitsauko zvina, zviripo zvitsauko zvishanu munaJakobho. Tiri kutaura nezvemari. Uye inotaura nezvekuti ungave wakachenjera nefuma yako sei. Uye isu tiri kuzotarisa kutsungirira. Unoitei kana iwe uchimirira Mwari? Imba yakaoma kwazvo kugara mukati iri mukamuri yekumirira kana iwe uri muchimhanyisa uye kwete Mwari. Ndipo patiri kutarisa munamato, iri meseji yekupedzisira yatichatarisa. Unonamata sei nezvematambudziko ako? Bhaibheri rinoti pane nzira yekunyengetera uye kuwana mhinduro, uye pane nzira yekusanamata. Uye isu tichave tiri kutarisa izvo. Zvino nhasi, tirikungotarisa pandima nhanhatu dzekutanga yebhuku raJakobho. Kana iwe usina Bhaibheri, saka ndinoda kuti iwe utore kubva pawebhusaiti iyi tsananguro, zvinyorwa zvekudzidzisa, nekuti mavhesi ese atiri kutarisa varipo pane yako pepa. James chitsauko chekutanga, ndima nhanhatu dzekutanga. Uye Bhaibheri rinotaura izvi kana richitaura nezvazvo kuva nematambudziko ako. Kutanga, James 1: 1 inotaura izvi. James, muranda waMwari newaIshe Jesu Kristu, kumadzinza gumi nemaviri akapararira pakati pendudzi, kwaziso. Zvino, rega ndimbomira pano kweminiti uye nditi uku ndiko kuiswa kwakanyanya rebhuku chero ripi zvaro riri muBhaibheri. Nekuti unoziva kuti James aive ani? Aive mukoma waJesu. Unorevei nezvazvo? Zvinoreva kuti aive Maria nemwanakomana waJoseph. Jesu aingova mwanakomana waMariya. Aisava mwanakomana waJoseph nekuti Mwari aive baba vaJesu. Asi Bhaibheri rinotiudza kuti Maria naJosefa takava nevana vazhinji gare gare, uye anototipa mazita avo. James anga asiri Mukristu. Aive asiri muteveri waKristu. Haana kutenda kuti mukoma wake aive Mesia panguva yehushumiri hwaJesu hwese. Aive akahadzika. Uye unozoona izvozvo, hama mudiki isingatendi mune hama yakura, zvakanaka, izvo zvingave zvakajeka. Chii chakaita kuti James ave mutendi munaJesu Kristu? Kumuka. Jesu paakadzoka kubva kurufu akafamba famba kwemamwe mazuva makumi mana uye James akamuona. Akave mutendi uye akazova mutungamiri kuChechi yeJerusarema. Saka kana paine chero munhu anga aine kodzero yekudonsa mazita, ndiye mukomana uyu. Aigona kunge akati, James, murume akakura pamwe naJesu. James, mukoma waJesu. James, shamwari yaJesu yepamoyo inokura. Ndiwo marudzi ezvinhu, asi iye haadaro. Anongoti James, muranda waMwari. Haakwezhe chinzvimbo, haasimudzi chimiro chake. Asi ipapo mundima yechipiri, iye anotanga kupinda mukati ichi chinyorwa chekutanga chechinangwa chaMwari mumatambudziko ako. Rega ndiverenge iwe. Anodaro, apo marudzi ese emiedzo kuungana muhupenyu hwako, usavagumbukira sevanopindira, asi vagamuchirei seshamwari. Ziva kuti vanouya kuzoedza kutenda kwako, uye kugadzira mamuri kunaka kwekutsungirira. Asi rega izvo zviitike zvirambe zviripo kusvikira iko kutsungirira yakakura kwazvo, uye iwe uchave uri munhu yeunhu hwakakura uye kutendeka isina mavara asina kusimba. Ndiro Shanduro yePhillips yaJakobho chitsauko chimwe, ndima mbiri kusvika kuitanhatu. Zvino, anoti kana marudzi ese emiedzo akauya muhupenyu hwako uye vanoungana muhupenyu hwako, akadaro, usazvitsamwira sevanopinda, muvagamuchire seshamwari. Anoti, une matambudziko, fara. Iwe une matambudziko, fara. Iwe une matambudziko, kunyemwerera. Zvino, ini ndoziva zvaunofunga. Unoenda, urikundibata mbichana? Nei ndichifanira kufara nezve COVID-19? Sei ndichifanira kugamuchira iyi miedzo muhupenyu hwangu? Izvi zvinogoneka sei? Kiyi yeiyi yose mafungiro ekuchengetedza mafungiro akanaka pakati penhamo ishoko rinoziva, ishoko reziva. Akataura, apo marudzi ese emhando idzi kuungana muhupenyu hwako, usavagumbukira sevanopindira, asi vagamuchirei seshamwari, uye muzive, muzive, vanouya kuzoedza kutenda kwako. Uye anoenderera mberi, izvo izvo zvicha gadzira muhupenyu hwavo. Izvo zvaari kutaura pano kuti kubudirira kwako mukubata mavhiki ari pamberi pedu mune ino COVID-19 denda izvo zvave kutenderera nyika, uye nekuwedzera Marudzi ari kudzima, uye ari kudzima maresitorendi uye ari kudzima zvitoro, uye vari kudzima zvikoro, uye vari kudzima machechi, uye vari kuvhara chero nzvimbo panoungana vanhu, uye senge pano muOrange County, uko kwatisingabvumidzwe kusangana nemunhu wese mwedzi uno. Anoti, kubudirira kwako mukubata nematambudziko aya inocherechedzwa nokunzwisisa kwako. Nenjere dzako. Uye nemafungiro ako kumatambudziko iwayo. Ndo zvaunoziva, ndizvo zvaunoziva. Zvino, chinhu chekutanga mundima iyi ndinoda kuti iwe uzive ndekuti Mwari anotipa zviyeuchidzo zvina nezvematambudziko. Unogona kuda kunyora izvi pasi. Zviyeuchidzo zvina nezvematambudziko muhupenyu hwako, zvinosanganisira dambudziko ratiri kupfuura izvozvi. Nhamba yekutanga, anodaro kutanga, matambudziko haadzivisiki. Matambudziko haadzivisiki. Zvino, ari kutaura sei izvozvo? Anoti, apo marudzi ese emiedzo anouya. Haatauri kana marudzi ese emiedzo akauya, anodaro kana. Unogona kuvimba nazvo. Ino haizi kudenga umo zvese zvakakwana. Iyi ndiyo Pasi panoputswa zvese. Uye ari kuti uchaita matambudziko, iwe uchaomerwa, iwe unovimba nazvo, unogona kutenga stock mariri. Zvino, ichi hachisi chinhu chinotaurwa naJames chete. Kwese kuburikidza nebhaibheri kunozvitaura. Jesu akati munyika muchava nemiedzo nemiedzo, uye muchava nedambudziko. Akataura kuti uchave nematambudziko muhupenyu. Saka sei tichishamisika kana tine matambudziko? Peter anoti usashamisika paunosangana nemiedzo inotyisa. Wati usaite senge chinhu chitsva. Wese munhu anopfuura nenguva yakaoma. Hupenyu hwakaoma. Iri harisi denga, iri Nyika. Hapana anodzivirira, hapana akasarudzika, hapana akachengetedzwa, hapana anosununguka. Anoti iwe unenge uine matambudziko nekuti hazvingadzivisiki. Iwe unoziva, ndinorangarira imwe nguva pandakanga ndiri kukoreji. Makore mazhinji apfuura, ndakanga ndichifambira dzimwe nguva dzakaoma chaizvo. Uye ndakatanga kunyengetera, ndakati, "Mwari ndipeiwo moyo murefu." Uye panzvimbo yemiedzo zvave kuita zvirinani, ivo vakawedzera kutonyanya. Ndipo pandakazoti, "Mwari, ndinoda moyo murefu," uye matambudziko akatowedzera. Ndipo pandakazoti, "Mwari, ndinoda moyo murefu," uye zvakawedzera kunyanyisa. Chii chaiitika? Zvakanaka, pakupedzisira ndakazoona kuti mushure memwedzi mitanhatu, Ini ndakanga ndiri munhu ane mwoyo murefu kupfuura pandakatanga kubuda, nenzira iyo Mwari yaindidzidzisa kushivirira yaive kuburikidza nematambudziko iwayo. Zvino, matambudziko haasi mamwe maitiro enzira yakasarudzwa kuti une sarudzo yekutora muhupenyu. Kwete, ivo vanodiwa, haukwanise kubuda kubva kwavari. Kuti upedze chikoro chehupenyu, uri kuenda kuburikidza nechikoro chakagogodza. Iwe unozotarisana nematambudziko, haadzivisiki. Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. Chechipiri chinhu chinotaurwa nebhaibheri nezvematambudziko ichi. Matambudziko akasiyana, izvo zvinoreva kuti ivo havana kufanana. Iwe hautore rimwe dambudziko rimwe mushure meimwe. Iwe unowana zvakawanda zvakasiyana zvakasiyana. Kwete chete iwe unowana 'em, asi iwe unowana akasiyana. Anoti kana iwe uchiedza, kana uine matambudziko emarudzi ese. Iwe unogona kutenderera izvo kana iwe uri kutora zvinyorwa. Kana marudzi ese emiedzo akauya muhupenyu hwako. Munoziva, ndiri murimi, uye ini ndakambodzidza. uye ini ndakawana kuti iyo hurumende pano muUnited States makamurwa 205 mhando dzakasiyana dzemasora. Ini ndinofunga 80% yavo inokura mubindu rangu. (anoseka) Ndinowanzo funga kuti kana ndichirima miriwo. Ini ndinofanira kubhadharisa kubvuma kuWarren's Weed Farm. Asi kune marudzi mazhinji emasora, uye kune marudzi mazhinji emiedzo, kune akawanda marudzi matambudziko. Ivo vanouya muhukuru hwese, vanouya mumhando dzose. Kune zvinopfuura makumi matatu nezvinonaka. Iri izwi pano, marudzi ese, parinoti kune marudzi ese emiedzo muhupenyu hwako, izvo chaizvo muchiGreek zvinoreva multicolored. Mune mamwe mazwi, kune akawanda emumvuri wekunetseka muhupenyu hwako, ungabvumirana nazvo here? Kune akawanda mimvuri yekushushikana. Hazvitarise zvese zvakafanana. Kune kushushikana mune zvemari, kune hukama hwehukama, kune kushushikana kwehutano, kune kusagadzikana kwemuviri, kune kushushikana kwenguva. Ari kuti iwo ese akasiyana mavara. Asi kana iwe ukabuda uye unotenga mota uye iwe uchida ruvara rwetsika, saka iwe unofanirwa kumirira iyo. Uyezve kana yagadzirwa, ipapo iwe unowana wako ruvara tsika. Ndiro chaizvo izwi rinoshandiswa pano. Iwo ruvara rwetsika, miyedzo yakawanda mune hwako hupenyu. Mwari anovatendera nechikonzero. Mamwe matambudziko ako akajairwa kuitwa. Vamwe vacho isu tese takangotarisana, seiyi, COVID-19. Asi arikuti matambudziko anosiyana. Uye zvandiri kureva nezvazvo ndezvinoita zvakasiyana mukukura. Mune mamwe mazwi, zvakaoma sei ivo vanouya. Dzakasiyana-siyana pakukwikwidzana, uye ndizvozvo. Hatizive kuti izvi zvichaguma rinhi. Hatizive kuti zvakaoma sei. Ndakaona chiratidzo rimwe zuva rikati, "Mune hupenyu hwese imwe mvura inonaya. "asi izvi zvinopusa." (anoseka) Uye ini ndinofunga kuti ndiyo nzira vanhu vazhinji vari kunzwa izvozvi. Uku kupusa. Matambudziko haadzivirike uye anosiyana. Zvinhu zvechitatu zvinotaurwa naJakobho kuti tisashamiswa zvinetso hazvifungidziriki. Ivo havana kufanofunga. Anoti apo miedzo inosangana muhupenyu hwako, kana iwe uchinge uchitora manotsi, tenderedza mutsara uyo. Vanopindirana muhupenyu hwako. Munoona, hapana dambudziko rinombouya kana iwe waririda kana pausingade. Zvinongouya kana zvoda kuuya. Icho chikamu chechikonzero idambudziko. Matambudziko anouya panguva isingafadzi kwazvo. Wakambonzwa senge dambudziko here yakauya muhupenyu hwako, iwe enda, kwete ikozvino. Chaizvoizvo, senge ikozvino? Kuno kuCaddleback Church, taive mushandirapamwe wakakura kurota nezveramangwana. Uye zvese zvakangoerekana zvaitika. Uye ndiri kuenda, kwete izvozvi. (chuckles) Kwete ikozvino. Wati wambove uine tirera flat pawanonoka? Iwe hautore tayara rakasununguka kana iwe uine nguva yakawanda. Uri mukukasira kuenda kumwe. Yakafanana neyevana masora pahembe yako itsva paunenge uchifamba uchienda kunokosha rinokosha manheru. Kana kuti unotsemura mabhurugwa ako usati wataura. Izvo chaizvo zvakaitika kwandiri imwe nguva paSvondo kare kare. Vamwe vanhu, vanoshivirira, havakwanise kumirira suo rinopfuurira. Vanongowana, vanofanira kuzviita, vanofanirwa kuzviita izvozvi, vanofanira kuzviita izvozvi. Ndinoyeuka makore mazhinji apfuura ndiri muJapan, uye ini ndakanga ndakamira pasitadhi yakamirira subway kusvika, uye paakavhura, magonhi akazaruka, uye jaya reJapan pakarepo projectile yakarutsa pandiri pandakanga ndimire ipapo. Uye ndakafunga, sei ini, sei ikozvino? Ivo havafungidzirike, vanouya kana iwe usingade 'em. Iwe haugone kufanotaura nezvematambudziko ari muhupenyu hwako. Zvino tarisa, inoti kana marudzi ese emiedzo, riini, hazvibviri, marudzi ese, zvinosiyana, kuungana muhupenyu hwako, izvo hazvifungike, anoti usagumbuke sevatorwa. Ari kuti chii pano? Zvakanaka, ini ndiri kuzotsanangura izvi zvakadzama. Asi hechino chechina chinotaurwa neBhaibheri pamusoro pematambudziko. Matambudziko ane chinangwa. Matambudziko ane chinangwa. Mwari vane chinangwa mune zvese. Kunyangwe zvinhu zvakaipa zvinoitika muhupenyu hwedu, Mwari vanogona kuburitsa zvakanaka kubva mazviri. Mwari haafanire kukonzera dambudziko rese. Akawanda ematambudziko atinozvikonzera isu pachedu. Vanhu vanoti, nei vanhu vachirwara? Zvakanaka, chimwe chikonzero ndechekuti hatiite izvo Mwari anotiudza kuti tiite. Kana isu takadya izvo Mwari anotiudza tidye, kana isu takarara senge Mwari atiudza kuti tizorore, kana tichirovedza seizvo Mwari anotiudza kurovedza. kana isu tisingatenderi kusagadzikana pamoyo muhupenyu hwedu sekureva kunoita Mwari, kana isu toteerera Mwari, isu hatingazove nematambudziko edu mazhinji. Zvidzidzo zvakaratidza kuti inenge 80% yehutano hutano munyika ino, muAmerica, zvinokonzerwa nezvinonzi chisingaperi mararamiro sarudzo. Mune mamwe mazwi, isu hatingoite zvakanaka. Isu hatiite chinhu chine hutano. Tinowanzoita izvo zvinokuvadza-zvinokuvadza. Asi zvaari kutaura pano, matambudziko ane chinangwa. Anodaro paunosangana nematambudziko. ziva kuti vauya kuzogadzira. Tenderedza mutsara uyo, vanouya kuzogadzira. Matambudziko anogona kubereka. Zvino, ivo havana kungozvigadzira. Hutachiona hweCOVID uhwu, kana ndikasapindure nezuva chairo. hazvingaburitse chero chinhu chikuru muhupenyu hwangu. Asi kana ndikapindura nenzira kwayo. kunyangwe zvinhu zvisina kunaka zvakanyanya muhupenyu hwangu inogona kubereka kukura uye kubatsire uye kukomborera, muhupenyu hwako uye nehupenyu hwangu. Vauya kuzogadzira. Ari kutaura pano kutambudzika nekushushikana uye kusuwa, ehe, uye kunyange kurwara kunogona kuzadza chimwe chinhu kukosha kana tikazvirega. Izvo zvese mune yedu sarudzo, zvese zviri mumaonero edu. Mwari vanoshandisa zvikukutu muhupenyu hwedu. Iwe unoti, zvakanaka, anozviita sei izvozvo? Mwari anoshandisa sei matambudziko nematambudziko muhupenyu hwedu? Zvakanaka, ndinotenda nekubvunza, nekuti ndima inotevera kana chikamu chinotevera chemavhesi acho chinodaro kuti Mwari anoshandisa iwo matatu nzira. Nzira nhatu, Mwari anoshandisa matambudziko muhupenyu hwako nzira nhatu. Kutanga, matambudziko anoidza kutenda kwangu. Zvino, kutenda kwako kwakafanana nemuswe. Muswe haugone kusimbiswa kunze kwekunge waedzwa, kunze kwekunge yakatambanudzwa, kunze kwekunge yaiswa pasi pekumanikidzwa. Iwe haugadzire mhasuru dzakasimba nekusaita chero chinhu. Unokudziridza tsandanyama dzakasimba nokuvatambanudza uye kuvasimbisa uye kuvayedza uye kuvasundira kusvikira kumagumo. Saka arikuti matambudziko auye kuzoedza kutenda kwangu. Anoti ziva kuti vanouya kuzoedza kutenda kwako. Zvino, iro izwi rekuyedza ipapo, icho chirefu munguva dzeBhaibheri dzaishandiswa kunatsa simbi. Uye zvawaizoita ndezvekuti iwe unotora simbi yakakosha sirivha kana goridhe kana chimwe chinhu, uye waizoisa muhari hombe, uye waidzipisa pakunyanyisa kupisa, nei? Mukudziya kukuru, zvese zvakasviba zvatsvairwa. Uye chinhu chimwe chasara igoridhe rakachena kana sirivheri yakachena. Ndiro izwi reChigiriki pano rekuyedza. Iyo ndiyo moto inonatsa apo Mwari paanoisa kupisa uye tinobvumira izvozvo muhupenyu hwedu, inopisa zvinhu zvisina basa. Unoziva chii chichaitika mumavhiki anotevera? Stuff yataifunga zvese yaikosha, tiri kuzoziva, hmm, ndakabatana ndizvozvo pasina izvozvo. Kuri kuzotangazve zvatinokoshesa, nekuti zvinhu zvichachinja. Zvino, iwo muenzaniso wemhando yekuti matambudziko anoedza sei kutenda kwako idzo nyaya dziri pamusoro paJobho mubhaibheri. Pane bhuku rese raJobho. Munoziva, Jobho akange ari murume akapfuma kwazvo muBhaibheri, uye muzuva rimwe chete, akarasikirwa nezvose. Akarasikirwa nemhuri yake yose, akarasikirwa nefuma yake yose, akarasikirwa neshamwari dzake dzose, magandanga akarwisa mhuri yake, akarwara nechirwere chisingaperi izvo zvaitadza kurapwa. Zvakanaka, iye ari terminal. Uye zvakadaro Mwari aive achiidza kutenda kwake. Uye Mwari anozodzorera iye zvakapetwa kaviri izvo zvaakanga anazvo asati apfuura muedzo mukuru. Pane imwe nguva ndakaverenga kuverenga kune imwe nzvimbo kare kare izvo zvakati vanhu vakaita kunge matumba etii. Iwe haunyatsoziva zviri 'em kusvikira iwe wadonha mumvura inopisa. Uye ipapo unogona kuona izvo chaizvo mukati mavo. Wakambove newe rimwe remazuva anopisa emvura here? Wakambove neimwe yemavhiki emvura anopisa kana mwedzi here? Tiri mumvura inopisa mamiriro izvozvi. Uye chii chave kuzobuda mauri ndizvo zviri mukati mako. Zvinoita kunge mazino. Kana ndiine mazino chubu uye ini ndinosundidzira, chii chave kubuda? Iwe unoti, zvakanaka, mazino. Kwete, kwete hazvo. Inogona kutaura mazino ekunze, asi inogona kunge ine marinara mchero kana peanut butter kana mayonnaise mukati. Chii chinobuda kunze kana chakaiswa pasi pekumanikidzwa chero zvirimo. Uye mumazuva ari pamberi apo paunobata nehutachiona hweCOVID, chii chave kubuda mauri ndizvo zviri mukati mako. Uye kana iwe uchizadzwa neshungu, izvo zvinobuda. Uye kana iwe uchizadzwa nekushushikana, izvo zvinobuda. Uye kana iwe uchizadzwa nehasha kana kunetseka kana mhosva kana kunyara kana kusagadzikana, izvo zvichabuda. Kana iwe uchizadzwa nekutya izvo, chero zviri mukati mako chii chinobuda kunze kwekumanikidzwa pauri? Uye ndizvo zvaari kutaura pano, idzo matambudziko anoidza kutenda kwangu. Unoziva, makore apfuura, ndakasangana nemurume akura chaizvo mumusangano makore mazhinji apfuura kumashure kuEast. Ndinofunga aive Tennessee. Uye iye, murume uyu akura andiudza magariro akabatsirwa zvakanyanya muhupenyu hwake. Uye ini ndakati, "Zvakanaka, ndinoda kunzwa nyaya iyi." "Ndiudze zvese nezvazvo." Uye kuti chaive chii chaakange ashanda pakuwaridza huni hupenyu hwake hwese. Aive ari muvezi wemaroni kwehupenyu hwake hwese. Asi rimwe zuva panguva yekuderera kwehupfumi, sahwira wake akapinda mukati ndokuerekana azivisa, "Wadzingwa." Uye hunyanzvi hwake hwese akabuda pamusuwo. Uye akaradzikwa aine makore makumi mana ekuzvarwa nemukadzi uye mhuri uye hapana mamwe mikana yebasa yakamupoteredza, uye kuderera kwezvinhu kuri kuitika panguva iyoyo. Uye akaora mwoyo, uye akatya. Vamwe vako vanganzwa saizvozvo izvozvi. Iwe unogona kunge watove wakaraswa kare. Zvimwe uri kutya kuti uchave kurara pasi panguva yeKutambudzika uku. Uye akange akaora mwoyo, aive akanaka pakutya. Iye akati, Ndanyora izvi pasi, akati, "Ndakaita senge "nyika yangu yakabaira nezuva randakadzingwa." "Asi ini pandakaenda kumba, ndakaudza mukadzi wangu zvakaitika, "akabvunza," Saka urikuitei manje? " "Uye ini ndati, saka kubvira pandakadzingwa," "Ndiri kuita izvo zvandagara ndichida kuita." "Iva anovaka. "Ndiri kuenda kumba imba yedu." "uye ndiri kuenda mubhizinesi rekuvaka." Uye akandiudza, "Unoziva, Rick, yangu yekutanga basa." "Kwaive kugadzirwa kwemotel maviri madiki." Ndozvakaita iye. Asi akati, "Mukati memakore mashanu, ndakanga ndiri mamirioni mazhinji." Iro zita remurume iyeye, murume wandaitaura naye, aive Wallace Johnson, uye bhizinesi raakatanga mushure mekudzingwa yakanzi Holiday Inns. Holiday Inns. Wallace akandiudza, "Rick, nhasi, kana ndichigona kuwana "murume akandidzinga, ndaida nemoyo wese." "titende nezvaakaita." Panguva iyoyo pazvakaitika, ini handina kunzwisisa Nei ndakadzingwa, nei ndakadzingwa. Asi ndakazongoona pava paya kuti kwaive kusanganisa kwaMwari uye chinoshamisa chirongwa chekuti andiise pabasa rekusarudza kwake. Matambudziko ane chinangwa. Ivo vane chinangwa. Ziva kuti vanouya kuzogadzira, uye chimwe chezvinhu zvekutanga vanogadzira kutenda kukuru, vanoedza kutenda kwako. Nhamba yechipiri, heyi yechipiri kubatsirwa kwezvinetso. Matambudziko anovandudza kutsungirira kwangu. Ivo vanokudziridza kutsungirira kwangu. Ndicho chikamu chinotevera chemitsara, chinodaro matambudziko aya anouya kukudziridza kutsungirira. Ivo vanokudziridza kutsungirira muhupenyu hwako. Ndeipi mhedzisiro yezvinetso muhupenyu hwako? Kugara simba. Chaizvoizvo kugona kubata kumanikidzwa. Nhasi tinozvidaidza kuti resilience. Kugona kukwirira kumashure. Uye humwe hwehunhu hukuru hunofanirwa nemwana wese kuti adzidze uye munhu wese mukuru anofanira kudzidza kusimba. Nekuti munhu wese anowa, munhu wese anogumburwa, munhu wese anofamba nenguva yakaoma, munhu wese anorwara panguva dzakasiyana. Wese munhu ane kukundikana muhupenyu hwavo. Ndoita sei iwe kubata. Kutsungirira, iwe unoramba uchingopfuurira uye uchisendamira. Zvakanaka, iwe unodzidza sei kuita izvozvo? Unodzidza sei kubata nekumanikidzwa? Kuburikidza nezviitiko, ndiyo chete nzira. Iwe haudzidze kubata kumanikidzwa mune zvinyorwa. Iwe haudzidze kubata kwekumanikidza mumusangano. Iwe unodzidza kubata kumanikidzwa nekuiswa pasi pekumanikidzwa. Uye hauzive zviri mauri kusvikira iwe wanyatso kuiswa mumamiriro ezvinhu akadaro. Mugore rechipiri reSaddleback Church, 1981, Ndakapfuura nenguva yekushushikana ipo vhiki yega yega ndaida kusiya basa. Uye ndaida kurega wega wega Svondo masikati. Uye zvakadaro, ndakanga ndiri kuenda munguva yakaoma muhupenyu hwangu, uye zvakadaro ndaigona kuisa tsoka imwe pamberi peimwe saMwari, usanditorere kuvaka chechi yakanaka, asi Mwari, ndipeiwo vhiki rino. Uye ini ndaingoramba. Ndiri kufara kuti handina kukanda mapfumo pasi. Asi ndinotonyanya kufara kuti Mwari havana kundisiya. Nekuti icho chaive muyedzo. Uye mukati megore iro remuyedzo, ndakakura mune mumweya uye hukama uye hwepamoyo uye hwepfungwa simba zvakandibvumidza makore gare gare kuti ndigunde mabhora emarudzi ese uye kubata kwakakura kusagadzikana muziso revanhu nekuti ndakaenda mugore iro yepa flat kunze kwakaoma, imwe mushure meimwe. Iwe unoziva, America yakave nerudo rwekufambidzana neyakareruka. Tinoda zviri nyore. Mumazuva uye mavhiki ari pamberi padambudziko iri, pane zvichave zvinhu zvakawanda zvisingafadzi. Kuvhiringidza. Uye chii chatiri kuita isu pachedu kana zvese zvisina kugadzikana, kana iwe uchingofanira kuramba uchingopfuurira mberi pausinganzwe uchida kuramba uchienderera. Munoziva, chinangwa chetrathlon kana chinangwa chemarathon Hazvisi zvekumhanyisa, kuti unosvika sei ipapo, zviri pamusoro pekutsungirira. Unopedza mujaho here? Iwe unogadzirira sei iyo mhando dzezvinhu? Kupfuura chete kuburikidza navo. Saka kana watambanudzwa mumazuva anotevera. usazvinetsa nezvazvo, usazvidya moyo nazvo. Matambudziko anovandudza kutsungirira kwangu. Matambudziko ane chinangwa, ane chinangwa. Chinhu chechitatu icho James anotiudza nezvematambudziko isu tinoenderera tichidaro kuti matambudziko anokura hunhu hwangu. Uye anoti izvi mundima ina yaJakobho chitsauko chimwe. Anoti asi, regai izvo zvienderere mberi kutozosvikira mava vanhu vane hunhu hwakakura uye kuvimbika pasina mavara asina kusimba. Haungadi here kuva nazvo? Haudi here kunzwa vanhu vachiti, iwe unoziva, mukadzi iyeye haana kana husina kusimba muhunhu hwake. Iye murume, murume iyeye haana kana asina kusimba mavara emunhu. Iwe unowana sei iwo rudzi rwehuunhu hwakasimba? Rega chiitiko chienderere mberi kusvikira waita vanhu, varume nevakadzi, vane hunhu hwakasimba uye kuvimbika pasina mavara asina kusimba. Munoziva, pane yakakurumbira ongororo yakaitwa yakawanda, makore mazhinji apfuura muRussia yandinoyeuka ichinyora, uye yaive pamhedzisiro yemaitiro akasiyana emararamiro zvakakanganisa kureba kana hupenyu hwehupenyu hwemhuka dzakasiyana. Uye saka vanoisa dzimwe mhuka muhupenyu hwakareruka, uye vanoisa dzimwe mhuka mune zvakanyanya kuomesa nenzvimbo dzakaipisisa. Uye masayendisiti akawana kuti mhuka izvo zvakaiswa mune yakasununguka uye nzvimbo dziri nyore, mamiriro, iwo mararamiro ehupenyu, chaizvo akave asina kusimba. Nekuda kwekuti magariro akange ari nyore, vakave vasina simba uye kukurumidza kupinda nechirwere. Uye avo vaive vakadzikama vakafa munguva pfupi pane avo vaitenderwa kusangana matambudziko akajairwa neupenyu. Izvo hazvifadze here? Zviri chokwadi mhuka ndine chokwadi ichokwadi zvehunhu hwedu, futi. Uye mutsika yekuMadokero kunyanya munyika yanhasi. takave nazvo zviri nyore nenzira dzakawanda. Kurarama hupenyu hwekureruka. Chikamu chikuru cheupenyu hwako muhupenyu hwako kukuita iwe uve saJesu Kristu mune hunhu. Kufunga saKristu, kuita saKristu, kurarama saKristu, kuda saKristu, kuva akanaka saKristu. Uye kana chiri chokwadi, uye Bhaibheri rinotaura izvi kakawanda, ipapo Mwari anozokutora iwe kuburikidza nezvinhu zvimwe chete izvo Jesu akapfuura kuti akure hunhu hwako. Iwe unoti, zvakanaka, Jesu akaita sei? Jesu rudo uye mufaro nerunyararo nemoyo murefu nemutsa, muchero weMweya, izvo zvinhu zvese izvo. Uye Mwari anozvigadzira sei izvo? Nekutiisa mune zvakapesana. Tinodzidza kushivirira kana tichiedzwa kusashivirira. Isu tinodzidza rudo kana takaiswa nevanhu vasina rudo. Isu tinodzidza mufaro mukati mekusuwa. Isu tinodzidza kumirira uye kuva nemhando iyoyo yekutsungirira kana tichifanira kumirira. Tinodzidza mutsa kana tichiedzwa kuva noudyire. Mumazuva ari pamberi, iko kuzenge kuri kuedza kwazvo kungo tsvaga mushop, ndokukwevera mukati, uye ini ndakati, tiri kuzotitarisira. Ini, pachezvangu, uye neni, mhuri yangu, isu vana uye kusapfuura uye kanganwa nezvevamwe vese. Asi izvo zvinodzikisira mweya wako. Kana iwe uchizotanga kufunga nezve vamwe vanhu uye kubatsira avo vari vasina kuchengetedzeka, vakuru uye avo vane preexisting mamiriro, uye kana iwe ukavavarira, mweya wako uchakura. mwoyo wako uchakura, iwe uchave uri munhu ari nani pakupera kwedambudziko iri kupfuura zvawaive pakutanga, zvakanaka? Unoona, Mwari, pavanoda kuvaka hunhu hwako, anogona kushandisa zvinhu zviviri. Anogona kushandisa Shoko rake, chokwadi chinotishandura, uye anogona kushandisa mamiriro, ayo akaoma zvakanyanya. Zvino, Mwari vangasarudza kushandisa nzira yekutanga, iro Shoko. Asi isu hatigaro teerera kuIzwi, saka anoshandisa mamiriro ezvinhu kuti atipe hanya. Uye zvakanyanya kuoma, asi kazhinji zvinonyanya kushanda. Zvino, iwe unoti, zvakanaka, zvakanaka, Rick, ndinowana, kuti matambudziko anosiyana uye ane chinangwa, uye vari pano kuti vaedze kutenda kwangu, uye ivo vachazove marudzi ese akasiyana, uye haauye pandiri kuda 'em. Uye Mwari vanogona kushandisa 'em kukurisa hunhu hwangu uye nekuvandudza hupenyu hwangu. Saka chii chandinofanirwa kuita? Mumazuva mashoma anotevera uye mumavhiki uye pamwe mwedzi iri pamberi apo isu takatarisana nedambudziko re coronavirus iri pamwe, ndinofanira kuita sei kumatambudziko muhupenyu hwangu? Uye handisi kungotaura nezveutachiona. Ndiri kutaura nezve matambudziko achauya semhedzisiro kwekuva kunze kwebasa kana vana vari kumba kana zvimwe zvinhu zvese zviri kushungurudza hupenyu sezvazvinowanzoitika. Ndinofanira kuita sei kumatambudziko ehupenyu hwangu? Zvakanaka, zvakare, James akatsanangudza chaizvo, uye anotipa matatu anoshanda kwazvo. iwo anopindirana mhinduro, asi ndiwo mhinduro dzakakodzera. Naizvozvo, kana ini ndikakuudza wekutanga, urikuenda, unofanirwa kunge uchindibata mbichana. Asi pane mhinduro nhatu, dzese dzinotanga naR. Mhinduro yekutanga yaanoti kana iwe uri vachipfuura nenguva yakaoma, fara. Iwe enda, uri kutamba here? Izvo zvinonzwika kutyisa. Handisi kutaura kufara pamusoro pechinetso. Nditevere pane izvi kweminiti chete. Anoti chiona icho chakachena mufaro. Bata matambudziko aya seshamwari. Zvino, usandinzwisisa. Iye haasi kutaura zvisiri izvo. Iye haasi kutaura pfeka purasitiki kunyemwerera, kunyepedzera kuti zvinhu zvese zvakanaka uye hazvina, nekuti handizvo. Pollyanna, Little Orphan Annie, zuva ichabuda mangwana, ingangobuda mangwana. Iye haasi kutaura kuramba chokwadi, kana zvachose. Iye haasi kutaura kuva anochist. Ah mukomana, ndinofanira kupfuura nekurwadziwa. Mwari anovenga kurwadziwa zvakanyanya sezvaunoita. O, ini ndinofanira kutambudzika, ndiani. Uye iwe une kuuraya uku, uye iwe unoziva, Ini ndinongova nekunzwa uku kwemweya kana ini ndonzwa zvakaipa. Aiwa, aiwa, aiwa, Mwari haadi kuti iwe uve muurayi. Mwari havadi kuti uwane maonero ekuona kurwadziwa. Unoziva, ndinorangarira imwe nguva yandakanga ndichidarika nguva yakaoma chaizvo uye shamwari yakanga ichiedza kuva nemutsa Ivo ndokuti: Unoziva, Rick, simbisa moyo "nekuti zvinhu zvinogona kutowedzera." Uye fungidzira chii, ivo vakawedzera kukuvara. Izvo zvaive zvisiri kubatsira zvachose. Ini ndakafara uye ivo vakawedzera kukuvara. (chuckles) Saka hazvisi zvekunyepedzera Pollyanna mafungiro akanaka. Kana ndikashanda nesimba, ndichave ndinofarira. Kwete, kwete, kwete, kwete, zvakanyanya, zvakadzama kupfuura ipapo. Hatifarire, teerera, isu hatifarire nekuda kwedambudziko. Isu tinofara mudambudziko, tichiri mudambudziko, pachine zvinhu zvakawanda zvekufara pamusoro pazvo. Kwete dambudziko iro roga, asi zvimwe zvinhu kuti isu tinogona kufara nezvazvo mumatambudziko. Nei tichigona kufara kunyange padambudziko? Nekuti tinoziva kuti kune chinangwa nazvo. Nekuti tinoziva kuti Mwari haazombotisiyi. Nekuti isu tinoziva zvakawanda zvakasiyana zvinhu. Isu tinoziva kuti Mwari vane chinangwa. Cherekedza anoti anoti chiona mufaro wakachena. Tenderedza izwi rinoti. Funga zvinoreva kugadzira nemaune pfungwa dzako. Iwe une maitiro ekugadzirisa kuti iwe uchafanirwa kugadzira pano. Iko kusarudza kwako kufara? MuPisarema 34 vhesi yekutanga, anodaro Ndicharumbidza Mwari nguva dzose. Nguva dzose. Uye anoti ndicha. Iko kusarudza kwemakuda, chisarudzo. Kuzvipira, sarudzo. Zvino, uri kuenda kuburikidza mwedzi ino pamberi neine maitiro akanaka kana maitiro akaipa. Kana maitiro ako akaipa, unozozvigadzira nevamwe vese vakakukomberedza vakasuwa. Asi kana chimiro chako chakanaka, chisarudzo chako kuti ufare. Iwe unoti, ngatitarisei kudivi rakajeka. Ngatitsvagei zvinhu izvo zvatinogona kutenda Mwari nazvo. Uye ngatizivei kuti kunyange pane zvakaipa, Mwari anogona kuburitsa zvakanaka pane zvakaipa. Saka ita mafungiro ekugadzirisa. Handisi kuzova neshungu panhamo iyi. Ndiri kuzova nani mudambudziko iri. Ndiri kuzosarudza, sarudzo yangu kufara. Zvakanaka, nhamba yechipiri, yechipiri R iko chikumbiro. Uye ikoko kukumbira Mwari huchenjeri. Izvi ndizvo zvaunoda kuita chero iwe uri munhamo. Unoda kukumbira Mwari huchenjeri. Svondo rapfuura, kana wakateerera kumharidzo yesvondo rapfuura, uye kana uchinge warikusha, dzokera online uye tarisa iwo meseji pakugadzira iyo kuburikidza nemupata wehutachiona pasina kutya. Sarudzo yako kuti ufare, asi wozobvunza Mwari njere. Uye iwe kukumbira kuna Mwari huchenjeri uye iwe unamate uye iwe unonamata nezvematambudziko ako. Ndima yechinomwe inotaura izvi munaJakobho wani. Kana muchirongwa ichi chero wako asingazive kusangana chero dambudziko, iri kunze kweshanduro yePhillips. Kana muchirongwa chero chipi zvacho chako asingazive kusangana chero dambudziko ripi neripi raunongofanira kubvunza kuna Mwari uyo anopa zvikuru kuvanhu vese pasina kuvaita kuti vanzwe vaine mhosva. Uye iwe unogona kuve nechokwadi chekuti huchenjeri hunodiwa uchapihwa. Ivo vanoti nei pazvinhu zvese ndaizokumbira huchenjeri pakati pechinetso? Saka iwe dzidza kubva mazviri. Saka iwe unogona kudzidza kubva padambudziko, ndosaka uchibvunza huchenjeri. Zvinonyanya kubatsira kana ukazomira kubvunza kuti nei, nei izvi zvichiitika, uye tanga kubvunza kuti chii, unoda kuti ndidzidze chii? Unoda kuti ndive chii? Ndingakura sei kubva pane izvi? Ndingaite sei kuti ndive mukadzi ari nani? Ndingaite sei kuti ndive murume ari nani kubudikidza nedambudziko iri? Ehe, ndiri kuedzwa. Ini handisi kuzonetseka kuti nei. Nei zvisingaite hazvo. Chii chakakosha chii, ndiri chii ndichave, uye chii chandiri kudzidza kubva pane izvi? Uye kuti uite izvozvo, iwe unofanirwa kukumbira huchenjeri. Saka iye anoti pese paunoda huchenjeri, bvunza Mwari chete, Mwari vanozokupa iwe. Saka unoti, Mwari, ini ndinoda huchenjeri samai. Vana vangu vari kuzogara kumusha kwemwedzi unotevera. Ini ndinoda huchenjeri sababa. Ini ndinotungamira sei kana mabasa edu ari munjodzi uye handikwanise kushanda izvozvi? Bvunza Mwari huchenjeri. Usabvunze nei, asi bvunza chii. Saka chekutanga iwe unofara, iwe unowana hunhu hwakanaka wekutaura kuti ndiri kuzotenda Mwari kwete nedambudziko, asi ndiri kuzotenda Mwari padambudziko. Nekuti zvakanaka zvaMwari kunyangwe hupenyu hwakamira. Ndosaka ndiri kudana aya akateedzana "Kutenda Kwechokwadi Kunoshanda Kana Hupenyu Husina." Kana hupenyu husina kushanda. Saka ndinofara uye ndinokumbira. Chinhu chechitatu chinonzi naJames kuita kuita zororo. Ehe, kungo rira kunze, usazvitorere zvese mumurwi wemitsipa. Usaore mwoyo zvakanyanya kuti hapana chaungaite. Usanetseka nezveramangwana. Mwari vanoti ndichakuchengeta, vimba neni. Iwe unovimba kuna Mwari kuti uzive zvakanakira. Unobatana naye. Iwe haupfupi-kutenderera mamiriro auri kuenda mairi. Asi iwe chingoti, Mwari, ini ndiri kuzorora. Handisi kusava nechokwadi. Handisi kusava nechokwadi. Ndiri kuzokuvimba mune aya mamiriro. Ndima yechisere ndiyo vhesi yekupedzisira yatiri kutarisa. Zvakanaka, isu tichatarisa imwezve muminiti. Asi ndima yechisere inoti, asi iwe unofanirwa kukumbira nokutendeka pasina kusahadzika kwekuvanzika. Chii chauri kukumbira mukutenda kwechokwadi? Bvunza huchenjeri. Uye uti, Mwari, ini ndinoda huchenjeri, uye ndinokutendai uri kuzondipa huchenjeri. Ndatenda, mave kundipa huchenjeri. Usafambire kunze, usakahadzika, asi chibvisei kuna Mwari. Munoziva, Bhaibheri rinodaro, pakutanga pandakataura kuti zvakataura izvi akawanda marudzi matambudziko. Iwe unoziva, tinotaura pamusoro pevakakomberedzwa, akawanda, akawanda marudzi ematambudziko. Iro izwi muchiGreek, marudzi mazhinji edambudziko, ndiro izwi rimwe chete iro rakafukidzwa muna 1 Petro chitsauko chechina, vhesi ina rakadaro Mwari vane marudzi mazhinji enyasha ekukupa. Mhando zhinji dzaMwari dzenyasha. Ndiyo yakafanana yakavhenganiswa, yakagadzirwa zvakasiyana, sedhaimani. Ari kuti chii ikoko? Pamatambudziko ese aunawo, pane nyasha kubva kuna Mwari dziripo. Kune ese marudzi mazhinji emuyedzo nedambudziko uye kuoma, kune mhando yenyasha nengoni uye simba iro Mwari anoda kukupa kuenzanisa iro dambudziko chairo. Unoda nyasha dzeizvi, unoda nyasha dze izvo, unoda nyasha dzeizvi. Mwari vanoti Nyasha dzangu dzakawanda nematambudziko auri kusangana nawo. Saka ndiri kuti chii? Ndiri kuti matambudziko ese ari muhupenyu hwako, kusanganisira dambudziko iri reCOVID, Dhiyabhorosi zvinoreva kukukunda iwe nematambudziko aya. Asi Mwari anoreva kukudziridza iwe kubudikidza nematambudziko aya. Anoda kukurira, satani, asi Mwari arikuda kukudziridza. Zvino, matambudziko anouya muhupenyu hwako hazviite kuti uve munhu uri nani. Vazhinji vanhu vanova vanovava vanhu kubva 'em. Hazvingoite kuti uve munhu ari nani. Iwo mafungiro ako ndiwo anoita mutsauko. Ndipo pandinoda kukupa chimwe chinhu kuti iwe urangarira. Nhamba yechina, chinhu chechina chekuyeuka paunenge uchisangana nematambudziko ndiko kuyeuka zvipikirwa zvaMwari. Rangarira zvipikirwa zvaMwari. Izvo zviri pasi mundima 12. Rega ndikuverengere ichi chipikirwa. James chitsauko chimwe, vhesi 12. Akaropafadzwa munhu anotsungirira mumuedzo, nekuti kana amira muedzo, achagamuchira korona yehupenyu yakavimbiswa naMwari, pane izwi, kune avo vanomuda. Rega ndiverenge zvakare. Ndinoda kuti iwe uzviteerere kwazvo. Akaropafadzwa munhu anotsungirira mumuedzo, Ndiani anogadzirisa matambudziko, semamiriro ezvinhu atiri izvozvi. Akaropafadzwa munhu anotsungirira, anotsungirira, Ndiani unotenda kuna Mwari, unoramba achitenda mukuedzwa, nekuti kana amira muedzo, unobuda kumashure, kutongwa uku hakusi kwekupedzisira. Pane magumo azvo. Uchabuda pane imwe mugumo wemugero. Iwe uchagamuchira korona yehupenyu. Zvakanaka, ini handitomboziva zvese izvo zvinoreva, asi zvakanaka. Korona yehupenyu yakavimbiswa naMwari kune vanomuda. Sarudzo yako kuti ufare. Chisarudzo chako kuvimba nehungwaru dzaMwari pane kusava nechokwadi. Kumbira Mwari huchenjeri kuti akubatsire kubva pamamiriro ako ezvinhu. Uye kumbira kuna Mwari kuti rutendo rutsungirire. Uye uti, Mwari, ini handisi kuzorega. Izvi zvichapfuurawo. Mumwe munhu akambobvunzwa, chii chaunofarira ndima yeBhaibheri? Vati, zvakaitika. Uye saka nei uchida iyo vhesi? Nekuti kana matambudziko auya, ndoziva kuti havana kuuya kuzogara. Vakazoitika. (chuckles) Uye ichokwadi mune aya mamiriro ezvinhu. Izvo hazvisi kuuya kuzogara, zviri kuitika. Zvino, ini ndinoda padyo nepfungwa idzi. Dambudziko haringori matambudziko. Izvo zvinowanzovazivisa, zvinowanzovazivisa. Dambudziko iri rinogona kuburitsa mamwe macheka muwanano yako. Dambudziko iri rinogona kuburitsa mamwe maroke muhukama hwako kuna Mwari. Dambudziko iri rinogona kuburitsa humwe hunhu mumararamiro ako, kuti uri munzira uchizvimanikidza iwe zvakanyanyisa. Uye saka tendera kuti Mwari vataure kwauri nezve izvo zvinoda kuchinja muhupenyu hwako, zvakanaka? Ndinoda kuti mufunge nezve vhiki rino, uye rega ini ndikupe mamwe matanho anoshanda, zvakanaka? Matanho anoshanda, nhamba yekutanga, ini ndinoda iwe kukurudzira mumwe munhu kuti vateerere meseji iyi. Iwe uchazviita here? Iwe uchapfuudza iyi link uye wotumira kune shamwari? Kana izvi zvakukurudzira, zvipfuure, uye uve unokurudzira vhiki rino. Wese munhu akakukomberedza anoda kukurudziro panguva yeKutambudzika uku. Saka tumira 'em kiungo. Vhiki mbiri dzakapfuura patakanga tine chechi mumamisasa edu, paLake Forest uye nemamwe mamwe makompasi edu eSaddleback, vanhu vanosvika zviuru makumi matatu vakazviratidza kuchechi. Asi vhiki ino yekupedzisira apo taifanira kumisa masevhisi uye isu tese taifanira kuona pamhepo, ini ndokuti, munhu wese enda kuboka rako diki unokoka vavakidzani vako uye koka shamwari dzako kuboka rako diki, taive nezviuru gumi nezvisere ISPs dzedzimba dzedu dzakabatana muvhisi. Izvi zvinoreva kuti pamwe hafu yemiriyoni yakatarisa meseji yesvondo rapfuura. Hafu yemiriyoni kana kupfuura. Sei, nekuti wakaudza mumwe munhu kuti vatarise. Uye ndinoda kukurudzira kuti uve chapupu chemashoko akanaka vhiki rino munyika inoda chaizvo nhau dzakanaka. Vanhu vanofanirwa kunzwa izvi. Tumira chinongedzo. Ndinotenda isu tinogona kukurudzira vanhu vane miriyoni vhiki ino kana isu tese tikapfuudza meseji, zvakanaka? Nhamba yechipiri, kana iwe uri muboka diki, hatisi gonna kukwanisa kusangana, kanenge mwedzi uno, ndizvozvo. Uye saka ndinokukurudzira kuti utange musangano wakasarudzika. Unogona kuva neboka repamhepo. Unoita sei iwe? Zvakanaka, pane zvigadzirwa kunze uko seZoom. Iwe unoda kutarisa kuti kunze, Zoom, ndeye mahara. Uye iwe unogona kusvika ipapo ndokuudza munhu wese kuti atore Zoom pafoni yavo kana pakombuta yavo, uye unogona kubatanidza vanhu vatanhatu kana vasere kana gumi, uye iwe unogona kuve neboka rako vhiki ino paZoom. Uye iwe unogona kuona mumwe nemumwe chiso, se Facebook Live, kana zvakaita sevamwe, munoziva, chii chiri pa iPhone kana uchitarisa paFaceTime. Zvakanaka, iwe haugone kuzviita neboka guru, asi unogona kuzviita nemunhu mumwe. Uye saka kurudzirana kutarisana kumeso kuburikidza nehunyanzvi. Isu tine ikozvino tekinoroji iyo yakanga isingawanikwe. Saka tarisa Zoom yeboka revaridzi boka. Uye chaizvo pano online iwe unogona kuwana rumwe ruzivo, zvakare. Nhamba yechitatu, kana usiri muboka diki, Ini ndichakubatsira iwe kuti uve muboka reInternet vhiki ino, ndicha. Zvese zvaunoda kuita is Email me, PastorRick@saddleback.com. PastorRick @ saddleback, izwi-rimwe, SADDLEBack, saddleback.com, uye ini ndichaita kuti iwe ubatanidzwe kuboka repamhepo, zvakanaka? Wobva waita chokwadi kana iwe uri chikamu cheSaddleback Church kuverenga tsamba yako yezuva nezuva yandiri kutumira zuva nezuva panguva yekutambudzika uku. Inonzi "Saddleback kumba." Iyo ine matipi, ine meseji inokurudzira, ine nhau dzaunogona kushandisa. Chinhu chinoshanda. Tinoda kugara tichikutana newe mazuva ese. Tora "Saddleback kumba." Kana ndisina email yako kero. saka hausi kuitora. Uye iwe unogona kunditumira email yako email kero kuna PastorRick@saddleback.com, uye ini ndichaisa iwe pane zvinyorwa, uye iwe unowana kubatana kwezuva nezuva, iyo yemazuva ese "Saddleback muImba" tsamba yepamhepo. Ini ndinongoda padhuze ndisati ndanamata nekutaura zvakare kuti ndinokuda sei. Ndanga ndichikunyengetererai mazuva ese, uye ndiri kuzoramba ndichikunyengeterera iwe. Tichapfuura izvi pamwechete. Uku hakusi kupera kwenyaya. Mwari achiri pachigaro chake, uye Mwari ari kushandisa izvi kukurisa kutenda kwako, kuunza vanhu pakutenda. Uye ndiani anoziva chii chichaitika. Tinogona kuve nerumutsiriro rwemweya kubva pane izvi zvese nekuti vanhu kazhinji vanotendeukira kuna Mwari pavanenge vari munguva yakaoma. Rega ndikunamatire. Baba ndinoda kukutendai kune wese munhu ndiani arikuteerera izvozvi. Ngatiraramei meseji yaJakobho chitsauko chekutanga, mavhesi matanhatu kana manomwe. Ngatidzidzei kuti matambudziko anouya, anozoitika, Ivo vakasiyana, ivo vane chinangwa, uye kuti iwe uri gonna vashandise zvakanaka muhupenyu hwedu kana tichivimba newe. Tibatsirei kusava nechokwadi. Ndibatsireiwo kufara, kukumbira, Ishe, uye kurangarira zvipikirwa zvako. Uye ndinonamatira munhu wese kuti vave nevhiki ine hutano. Muzita raJesu, ameni. Mwari vakuropafadze, munhu wese. Pfuudza izvi pane mumwe munhu.
&quot;Kutenda Kunobata Matambudziko&quot; naPastor Rick Warren
< start="1.34" dur="1.42"> - Mhoroi munhu wese, ini ndiRick Warren, >
< start="2.76" dur="1.6"> Mufundisi paSaddleback Church uye munyori >
< start="4.36" dur="2.58"> ye "Icho Chinangwa Chakatengeswa Hupenyu" uye mutauri >
< start="6.94" dur="2.71"> pane ye "Zuva Nezuva Tariro" chirongwa. >
< start="9.65" dur="2.53"> Maita basa nekutepfenyura. >
< start="12.18" dur="3.59"> Iwe unoziva, vhiki ino pano muOrange County, California, >
< start="15.77" dur="2.47"> hurumende yakazivisa kuti ivo vari kurambidza >
< start="18.24" dur="4.19"> Misangano yose yemhando ipi neipi, yezve chero saizi >
< start="22.43" dur="1.46"> kusvika pakupera kwemwedzi. >
< start="23.89" dur="2.81"> Saka tinogamuchirwa kuCaddleback Church mumusha. >
< start="26.7" dur="1.41"> Ndiri kufara kuti mave pano. >
< start="28.11" dur="5"> Uye ini ndiri kuzokudzidzisa iwe nevhidhiyo >
< start="33.31" dur="4.59"> pakati pezvino uye chero nguva iyi dambudziko reCOVID-19 rinopera. >
< start="37.9" dur="2.12"> Saka tinogamuchirwa kuCaddleback Church mumusha. >
< start="40.02" dur="3.34"> Uye ndinoda kukukoka kuti unditevere vhiki yega yega, >
< start="43.36" dur="2.25"> kuve chikamu cheminamato iyi yekunamata pamwe chete. >
< start="45.61" dur="2.91"> Tichava nemimhanzi uye tinamate pamwechete, >
< start="48.52" dur="2.44"> uye ndinenge ndichiendesa izwi kubva muIzwi raMwari. >
< start="50.96" dur="3.01"> Iwe unoziva, sezvandaifunga pamusoro peizvi, >
< start="53.97" dur="2.15"> nenzira, kutanga ini ndinofanira kukuudza. >
< start="56.12" dur="3.84"> Ndakafunga kuti ivo vaizotitadzisa kusangana. >
< start="59.96" dur="3.6"> Uye saka vhiki ino, ini ndanga ndine iyo Saddleback studio >
< start="63.56" dur="1.32"> ndakaenda kugaraji kwangu. >
< start="64.88" dur="2.34"> Ndiri kunyatsopaka izvi mugaraji mangu. >
< start="67.22" dur="2.46"> Yangu skeletal tech vashandi. >
< start="69.68" dur="1.979"> Huya upinde, vakomana, uti wani kune wese munhu. >
< start="71.659" dur="2.101"> (anoseka) >
< start="73.76" dur="3.12"> Ivo vakabatsira kuifambisa pamusoro apa uye kuisa iyo kumusoro >
< start="76.88" dur="4.74"> kuitira kuti tigone kutaura newe pasvondo. >
< start="81.62" dur="3.32"> Zvino, sezvandaifunga pamusoro pezvatinofanira kufukidza >
< start="84.94" dur="3.22"> pakati peiyi COVID-19 dambudziko, >
< start="88.16" dur="2.98"> Ndakabva ndangofunga bhuku raJames. >
< start="91.14" dur="2.67"> Bhuku raJakobho ibhuku diki chaizvo >
< start="93.81" dur="2.15"> pedyo nekuguma kweTestamente Itsva. >
< start="95.96" dur="3.81"> Asi zvinoshanda uye zvinobatsira kwazvo, >
< start="99.77" dur="5"> uye ndinodaidza bhuku iri kutenda uko kunoshanda kana hupenyu husinoshanda. >
< start="105.56" dur="3.67"> Uye ndakafunga kana paine chero chinhu chinodiwa izvozvi, >
< start="109.23" dur="4.75"> isu tinoda here kutenda kunoshanda kana hupenyu husingaite. >
< start="113.98" dur="2.86"> Nekuti haisi kushanda zvakanaka izvozvi. >
< start="116.84" dur="2.75"> Uye saka nhasi, vhiki rino, tiri kutanga >
< start="119.59" dur="3.25"> rwendo pamwechete urwo kukukurudzira >
< start="122.84" dur="1.03"> kubudikidza nedambudziko iri. >
< start="123.87" dur="3.22"> Uye ini handidi kuti iwe upotsa chero yeiyi mameseji. >
< start="127.09" dur="4.1"> Nekuti bhuku raJakobho rinonyatsoverenga gumi nemaviri >
< start="131.19" dur="4.34"> zvivakwa zvehupenyu, 14 nyaya dzakakosha dzehupenyu, >
< start="135.53" dur="3.76"> 14 nzvimbo idzo yega yega yako >
< start="139.29" dur="1.91"> ndatova nechekuita neupenyu hwako, >
< start="141.2" dur="3.17"> uye uchafanirwa kubata mune ramangwana. >
< start="144.37" dur="3.52"> Semuenzaniso, muchitsauko chimwe chaJames, >
< start="147.89" dur="1.6"> rega ndimbokupa chidimbu chidiki chebhuku racho. >
< start="149.49" dur="1.42"> Ingori zvitsauko zvina. >
< start="150.91" dur="2.99"> Chitsauko chekutanga, chinotanga kutaura nezvekuomerwa. >
< start="153.9" dur="1.77"> Uye isu tiri kuzotaura nezvazvo nhasi. >
< start="155.67" dur="4.13"> Chii chinangwa chaMwari pamatambudziko ako? >
< start="159.8" dur="1.6"> Ipapo inotaura pamusoro pesarudzo. >
< start="161.4" dur="1.62"> Unoita sei pfungwa dzako? >
< start="163.02" dur="2.085"> Unoziva sei nguva yekugara, yekuenda? >
< start="165.105" dur="2.335"> Unoziva sei zvekuita, unoita sei sarudzo? >
< start="167.44" dur="2.41"> Uyezve inotaura nezvemuedzo. >
< start="169.85" dur="3.29"> Uye isu tichatarisa kuti unokunda sei miedzo inowanzoitika >
< start="173.14" dur="3.24"> muhupenyu hwako zvinoita senge zvichiramba zvichikuita kuti utadze. >
< start="176.38" dur="2.04"> Uyezve inotaura nezve kutungamira. >
< start="178.42" dur="2.68"> Uye inotaura pamusoro patingaropafadza sei Bhaibheri. >
< start="181.1" dur="2.24"> Kwete kungoverenga chete, asi kukomborerwe nazvo. >
< start="183.34" dur="1.56"> Izvi ndizvo zvese muchitsauko chekutanga. >
< start="184.9" dur="2.36"> Uye isu tichatarisa kune avo mumavhiki anotevera. >
< start="187.26" dur="2.7"> Chitsauko chechipiri chinotaura nezvehukama. >
< start="189.96" dur="3.06"> Tiri kutarisa kuti unoita sei vanhu zvakanaka. >
< start="193.02" dur="2.628"> Uye nevanhu vanofanirwa kugara pamba, >
< start="195.648" dur="4.242"> vese mumhuri pamwe chete, vanaamai naamai nanababa, >
< start="199.89" dur="2.32"> uye vanhu vanozosvika panjodzi dzeumwe neumwe. >
< start="202.21" dur="2.74"> Ndiko kunenge kuri meseji yakakosha pahukama. >
< start="204.95" dur="1.39"> Ipapo chinotaura nezvekutenda. >
< start="206.34" dur="4.76"> Unotenda sei Mwari kana usinga farire zvakadaro? >
< start="211.1" dur="2.18"> uye kana zvinhu zvaenda nenzira isiriyo? >
< start="213.28" dur="1.64"> Izvi ndizvo zvese muchitsauko chechipiri. >
< start="214.92" dur="3.32"> Chitsauko chechitatu, isu tiri kuzotaura nezvekukurukurirana. >
< start="218.24" dur="1.66"> Simba rekutaura. >
< start="219.9" dur="2.12"> Uye ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvakakosha >
< start="222.02" dur="3.73"> mubhaibheri mune sei akabata muromo wako. >
< start="225.75" dur="2.25"> Izvo zvakakosha kana tiri munyatwa kana kwete. >
< start="228" dur="2.27"> Uyezve inotaura nezvehushamwari. >
< start="230.27" dur="2.21"> Uye inotipa ruzivo runoshanda chaizvo >
< start="232.48" dur="2.71"> paunoita sei kuvaka huchenjeri hushamwari >
< start="235.19" dur="2.7"> uye dzivisa ushamwari husina kuchenjera. >
< start="237.89" dur="2.24"> Icho chitsauko chechitatu. >
< start="240.13" dur="3.5"> Chitsauko chechina chiri pakupokana. >
< start="243.63" dur="2.39"> Uye muchitsauko chechina, tinotaura nezvazvo >
< start="246.02" dur="1.88"> unodzivirira sei kupokana >
< start="247.9" dur="1.56"> Uye izvozvo zvichabatsira chaizvo. >
< start="249.46" dur="2.78"> Sezvo kukakavara kuchimuka uye kushungurudzika kuchikura, >
< start="252.24" dur="2.94"> Sezvo vanhu vari kubva kubasa, iwe unodzivisa sei kupokana? >
< start="255.18" dur="2.03"> Uyezve inotaura nezve kutonga vamwe. >
< start="257.21" dur="2.74"> Iwe unorega sei kutamba Mwari? >
< start="259.95" dur="1.84"> Izvo zvaizokonzeresa rugare rwakawanda muhupenyu hwedu >
< start="261.79" dur="1.08"> kana isu taigona kuzviita. >
< start="262.87" dur="1.67"> Uyezve inotaura nezveramangwana. >
< start="264.54" dur="1.82"> Unoronga sei ramangwana? >
< start="266.36" dur="1.56"> Izvo chete zviri muchitsauko chechina. >
< start="267.92" dur="2.75"> Zvino, muchitsauko chekupedzisira, chitsauko chechishanu, ndakakuudza >
< start="270.67" dur="0.98"> pakanga paine zvitsauko zvina, zviripo >
< start="271.65" dur="1.683"> zvitsauko zvishanu munaJakobho. >
< start="274.327" dur="2.243"> Tiri kutaura nezvemari. >
< start="276.57" dur="3.65"> Uye inotaura nezvekuti ungave wakachenjera nefuma yako sei. >
< start="280.22" dur="1.73"> Uye isu tiri kuzotarisa kutsungirira. >
< start="281.95" dur="3.26"> Unoitei kana iwe uchimirira Mwari? >
< start="285.21" dur="1.92"> Imba yakaoma kwazvo kugara mukati >
< start="287.13" dur="3.87"> iri mukamuri yekumirira kana iwe uri muchimhanyisa uye kwete Mwari. >
< start="291" dur="1.29"> Ndipo patiri kutarisa munamato, >
< start="292.29" dur="2.07"> iri meseji yekupedzisira yatichatarisa. >
< start="294.36" dur="1.94"> Unonamata sei nezvematambudziko ako? >
< start="296.3" dur="2.58"> Bhaibheri rinoti pane nzira yekunyengetera uye kuwana mhinduro, >
< start="298.88" dur="2.29"> uye pane nzira yekusanamata. >
< start="301.17" dur="1.27"> Uye isu tichave tiri kutarisa izvo. >
< start="302.44" dur="3.763"> Zvino nhasi, tirikungotarisa pandima nhanhatu dzekutanga >
< start="306.203" dur="2.072"> yebhuku raJakobho. >
< start="308.275" dur="5"> Kana iwe usina Bhaibheri, saka ndinoda kuti iwe utore >
< start="313.46" dur="3.73"> kubva pawebhusaiti iyi tsananguro, zvinyorwa zvekudzidzisa, >
< start="317.19" dur="2.02"> nekuti mavhesi ese atiri kutarisa >
< start="319.21" dur="2.04"> varipo pane yako pepa. >
< start="321.25" dur="3.22"> James chitsauko chekutanga, ndima nhanhatu dzekutanga. >
< start="324.47" dur="4.07"> Uye Bhaibheri rinotaura izvi kana richitaura nezvazvo >
< start="328.54" dur="2.33"> kuva nematambudziko ako. >
< start="330.87" dur="2.35"> Kutanga, James 1: 1 inotaura izvi. >
< start="333.22" dur="5"> James, muranda waMwari newaIshe Jesu Kristu, >
< start="338.86" dur="4.18"> kumadzinza gumi nemaviri akapararira pakati pendudzi, kwaziso. >
< start="343.04" dur="2.23"> Zvino, rega ndimbomira pano kweminiti uye nditi >
< start="345.27" dur="2.95"> uku ndiko kuiswa kwakanyanya >
< start="348.22" dur="1.71"> rebhuku chero ripi zvaro riri muBhaibheri. >
< start="349.93" dur="2.01"> Nekuti unoziva kuti James aive ani? >
< start="351.94" dur="3.073"> Aive mukoma waJesu. >
< start="355.013" dur="1.507"> Unorevei nezvazvo? >
< start="356.52" dur="2.19"> Zvinoreva kuti aive Maria nemwanakomana waJoseph. >
< start="358.71" dur="2.899"> Jesu aingova mwanakomana waMariya. >
< start="361.609" dur="4.591"> Aisava mwanakomana waJoseph nekuti Mwari aive baba vaJesu. >
< start="366.2" dur="2.47"> Asi Bhaibheri rinotiudza kuti Maria naJosefa >
< start="368.67" dur="3.52"> takava nevana vazhinji gare gare, uye anototipa mazita avo. >
< start="372.19" dur="2.87"> James anga asiri Mukristu. >
< start="375.06" dur="2.27"> Aive asiri muteveri waKristu. >
< start="377.33" dur="3.54"> Haana kutenda kuti mukoma wake aive Mesia >
< start="380.87" dur="1.78"> panguva yehushumiri hwaJesu hwese. >
< start="382.65" dur="1.29"> Aive akahadzika. >
< start="383.94" dur="3.14"> Uye unozoona izvozvo, hama mudiki isingatendi >
< start="387.08" dur="3.22"> mune hama yakura, zvakanaka, izvo zvingave zvakajeka. >
< start="390.3" dur="3.81"> Chii chakaita kuti James ave mutendi munaJesu Kristu? >
< start="394.11" dur="1.56"> Kumuka. >
< start="395.67" dur="4.42"> Jesu paakadzoka kubva kurufu akafamba famba >
< start="400.09" dur="1.96"> kwemamwe mazuva makumi mana uye James akamuona. >
< start="402.05" dur="3.79"> Akave mutendi uye akazova mutungamiri >
< start="405.84" dur="2.09"> kuChechi yeJerusarema. >
< start="407.93" dur="3.82"> Saka kana paine chero munhu anga aine kodzero yekudonsa mazita, ndiye mukomana uyu. >
< start="411.75" dur="4.06"> Aigona kunge akati, James, murume akakura pamwe naJesu. >
< start="415.81" dur="2.95"> James, mukoma waJesu. >
< start="418.76" dur="3.87"> James, shamwari yaJesu yepamoyo inokura. >
< start="422.63" dur="1.47"> Ndiwo marudzi ezvinhu, asi iye haadaro. >
< start="424.1" dur="2.68"> Anongoti James, muranda waMwari. >
< start="426.78" dur="4.97"> Haakwezhe chinzvimbo, haasimudzi chimiro chake. >
< start="431.75" dur="2.24"> Asi ipapo mundima yechipiri, iye anotanga kupinda mukati >
< start="433.99" dur="5"> ichi chinyorwa chekutanga chechinangwa chaMwari mumatambudziko ako. >
< start="439.07" dur="1.86"> Rega ndiverenge iwe. >
< start="440.93" dur="2.41"> Anodaro, apo marudzi ese emiedzo >
< start="444.2" dur="5"> kuungana muhupenyu hwako, usavagumbukira sevanopindira, >
< start="449.52" dur="3.15"> asi vagamuchirei seshamwari. >
< start="452.67" dur="2.82"> Ziva kuti vanouya kuzoedza kutenda kwako, >
< start="455.49" dur="4.8"> uye kugadzira mamuri kunaka kwekutsungirira. >
< start="460.29" dur="4.32"> Asi rega izvo zviitike zvirambe zviripo kusvikira iko kutsungirira >
< start="464.61" dur="5"> yakakura kwazvo, uye iwe uchave uri munhu >
< start="470.01" dur="5"> yeunhu hwakakura uye kutendeka >
< start="475.11" dur="2.71"> isina mavara asina kusimba. >
< start="477.82" dur="2.24"> Ndiro Shanduro yePhillips >
< start="480.06" dur="2.73"> yaJakobho chitsauko chimwe, ndima mbiri kusvika kuitanhatu. >
< start="482.79" dur="3.377"> Zvino, anoti kana marudzi ese emiedzo akauya muhupenyu hwako >
< start="486.167" dur="2.963"> uye vanoungana muhupenyu hwako, akadaro, usazvitsamwira >
< start="489.13" dur="1.69"> sevanopinda, muvagamuchire seshamwari. >
< start="490.82" dur="2.57"> Anoti, une matambudziko, fara. >
< start="493.39" dur="2.09"> Iwe une matambudziko, fara. >
< start="495.48" dur="1.807"> Iwe une matambudziko, kunyemwerera. >
< start="499.51" dur="0.87"> Zvino, ini ndoziva zvaunofunga. >
< start="500.38" dur="1.94"> Unoenda, urikundibata mbichana? >
< start="502.32" dur="3.15"> Nei ndichifanira kufara nezve COVID-19? >
< start="505.47" dur="5"> Sei ndichifanira kugamuchira iyi miedzo muhupenyu hwangu? >
< start="510.6" dur="2.31"> Izvi zvinogoneka sei? >
< start="512.91" dur="3.74"> Kiyi yeiyi yose mafungiro ekuchengetedza >
< start="516.65" dur="2.85"> mafungiro akanaka pakati penhamo >
< start="519.5" dur="3.65"> ishoko rinoziva, ishoko reziva. >
< start="523.15" dur="2.19"> Akataura, apo marudzi ese emhando idzi >
< start="525.34" dur="2.99"> kuungana muhupenyu hwako, usavagumbukira sevanopindira, >
< start="528.33" dur="4.89"> asi vagamuchirei seshamwari, uye muzive, muzive, >
< start="533.22" dur="3.75"> vanouya kuzoedza kutenda kwako. >
< start="536.97" dur="3.839"> Uye anoenderera mberi, izvo izvo zvicha gadzira muhupenyu hwavo. >
< start="540.809" dur="5"> Izvo zvaari kutaura pano kuti kubudirira kwako mukubata >
< start="545.99" dur="4.44"> mavhiki ari pamberi pedu mune ino COVID-19 denda >
< start="550.43" dur="2.87"> izvo zvave kutenderera nyika, uye nekuwedzera >
< start="553.3" dur="3.11"> Marudzi ari kudzima, uye ari kudzima >
< start="556.41" dur="2.31"> maresitorendi uye ari kudzima zvitoro, >
< start="558.72" dur="1.89"> uye vari kudzima zvikoro, >
< start="560.61" dur="1.57"> uye vari kudzima machechi, >
< start="562.18" dur="1.69"> uye vari kuvhara chero nzvimbo >
< start="563.87" dur="3.86"> panoungana vanhu, uye senge pano muOrange County, >
< start="567.73" dur="4.29"> uko kwatisingabvumidzwe kusangana nemunhu wese mwedzi uno. >
< start="572.02" dur="3.75"> Anoti, kubudirira kwako mukubata nematambudziko aya >
< start="575.77" dur="3.49"> inocherechedzwa nokunzwisisa kwako. >
< start="579.26" dur="1.3"> Nenjere dzako. >
< start="580.56" dur="3.24"> Uye nemafungiro ako kumatambudziko iwayo. >
< start="583.8" dur="3.69"> Ndo zvaunoziva, ndizvo zvaunoziva. >
< start="587.49" dur="3.79"> Zvino, chinhu chekutanga mundima iyi ndinoda kuti iwe uzive >
< start="591.28" dur="3.957"> ndekuti Mwari anotipa zviyeuchidzo zvina nezvematambudziko. >
< start="595.237" dur="2.253"> Unogona kuda kunyora izvi pasi. >
< start="597.49" dur="2.07"> Zviyeuchidzo zvina nezvematambudziko muhupenyu hwako, >
< start="599.56" dur="2.35"> zvinosanganisira dambudziko ratiri kupfuura izvozvi. >
< start="601.91" dur="5"> Nhamba yekutanga, anodaro kutanga, matambudziko haadzivisiki. >
< start="607.42" dur="2.34"> Matambudziko haadzivisiki. >
< start="609.76" dur="1.04"> Zvino, ari kutaura sei izvozvo? >
< start="610.8" dur="4.33"> Anoti, apo marudzi ese emiedzo anouya. >
< start="615.13" dur="4.41"> Haatauri kana marudzi ese emiedzo akauya, anodaro kana. >
< start="619.54" dur="1.72"> Unogona kuvimba nazvo. >
< start="621.26" dur="3.27"> Ino haizi kudenga umo zvese zvakakwana. >
< start="624.53" dur="2.66"> Iyi ndiyo Pasi panoputswa zvese. >
< start="627.19" dur="2.05"> Uye ari kuti uchaita matambudziko, >
< start="629.24" dur="3.44"> iwe uchaomerwa, iwe unovimba nazvo, >
< start="632.68" dur="2.37"> unogona kutenga stock mariri. >
< start="635.05" dur="2.99"> Zvino, ichi hachisi chinhu chinotaurwa naJames chete. >
< start="638.04" dur="1.62"> Kwese kuburikidza nebhaibheri kunozvitaura. >
< start="639.66" dur="2.77"> Jesu akati munyika muchava nemiedzo >
< start="642.43" dur="3.68"> nemiedzo, uye muchava nedambudziko. >
< start="646.11" dur="2.29"> Akataura kuti uchave nematambudziko muhupenyu. >
< start="648.4" dur="3.07"> Saka sei tichishamisika kana tine matambudziko? >
< start="651.47" dur="1.632"> Peter anoti usashamisika >
< start="653.102" dur="2.558"> paunosangana nemiedzo inotyisa. >
< start="655.66" dur="1.786"> Wati usaite senge chinhu chitsva. >
< start="657.446" dur="2.744"> Wese munhu anopfuura nenguva yakaoma. >
< start="660.19" dur="2.04"> Hupenyu hwakaoma. >
< start="662.23" dur="2.53"> Iri harisi denga, iri Nyika. >
< start="664.76" dur="3.18"> Hapana anodzivirira, hapana akasarudzika, >
< start="667.94" dur="2.94"> hapana akachengetedzwa, hapana anosununguka. >
< start="670.88" dur="1.73"> Anoti iwe unenge uine matambudziko >
< start="672.61" dur="2.78"> nekuti hazvingadzivisiki. >
< start="675.39" dur="3.84"> Iwe unoziva, ndinorangarira imwe nguva pandakanga ndiri kukoreji. >
< start="679.23" dur="2.27"> Makore mazhinji apfuura, ndakanga ndichifambira >
< start="681.5" dur="1.71"> dzimwe nguva dzakaoma chaizvo. >
< start="683.21" dur="3.09"> Uye ndakatanga kunyengetera, ndakati, "Mwari ndipeiwo moyo murefu." >
< start="686.3" dur="2.91"> Uye panzvimbo yemiedzo zvave kuita zvirinani, ivo vakawedzera kutonyanya. >
< start="689.21" dur="2.22"> Ndipo pandakazoti, "Mwari, ndinoda moyo murefu," >
< start="691.43" dur="1.72"> uye matambudziko akatowedzera. >
< start="693.15" dur="2.43"> Ndipo pandakazoti, "Mwari, ndinoda moyo murefu," >
< start="695.58" dur="2.93"> uye zvakawedzera kunyanyisa. >
< start="698.51" dur="1.77"> Chii chaiitika? >
< start="700.28" dur="1.82"> Zvakanaka, pakupedzisira ndakazoona kuti mushure memwedzi mitanhatu, >
< start="702.1" dur="2.64"> Ini ndakanga ndiri munhu ane mwoyo murefu kupfuura pandakatanga kubuda, >
< start="704.74" dur="2.07"> nenzira iyo Mwari yaindidzidzisa kushivirira >
< start="706.81" dur="3.2"> yaive kuburikidza nematambudziko iwayo. >
< start="710.01" dur="2.85"> Zvino, matambudziko haasi mamwe maitiro enzira yakasarudzwa >
< start="712.86" dur="2.44"> kuti une sarudzo yekutora muhupenyu. >
< start="715.3" dur="2.863"> Kwete, ivo vanodiwa, haukwanise kubuda kubva kwavari. >
< start="719.01" dur="3.71"> Kuti upedze chikoro chehupenyu, >
< start="722.72" dur="1.96"> uri kuenda kuburikidza nechikoro chakagogodza. >
< start="724.68" dur="2.87"> Iwe unozotarisana nematambudziko, haadzivisiki. >
< start="727.55" dur="1.35"> Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. >
< start="728.9" dur="2.43"> Chechipiri chinhu chinotaurwa nebhaibheri nezvematambudziko ichi. >
< start="731.33" dur="3.923"> Matambudziko akasiyana, izvo zvinoreva kuti ivo havana kufanana. >
< start="735.253" dur="2.817"> Iwe hautore rimwe dambudziko rimwe mushure meimwe. >
< start="738.07" dur="1.89"> Iwe unowana zvakawanda zvakasiyana zvakasiyana. >
< start="739.96" dur="2.11"> Kwete chete iwe unowana 'em, asi iwe unowana akasiyana. >
< start="742.07" dur="5"> Anoti kana iwe uchiedza, kana uine matambudziko emarudzi ese. >
< start="748.25" dur="2.09"> Iwe unogona kutenderera izvo kana iwe uri kutora zvinyorwa. >
< start="750.34" dur="3.54"> Kana marudzi ese emiedzo akauya muhupenyu hwako. >
< start="753.88" dur="3.25"> Munoziva, ndiri murimi, uye ini ndakambodzidza. >
< start="757.13" dur="2.32"> uye ini ndakawana kuti iyo hurumende pano >
< start="759.45" dur="2.18"> muUnited States makamurwa >
< start="761.63" dur="3.493"> 205 mhando dzakasiyana dzemasora. >
< start="765.123" dur="4.767"> Ini ndinofunga 80% yavo inokura mubindu rangu. (anoseka) >
< start="769.89" dur="2.52"> Ndinowanzo funga kuti kana ndichirima miriwo. >
< start="772.41" dur="2.85"> Ini ndinofanira kubhadharisa kubvuma kuWarren's Weed Farm. >
< start="775.26" dur="3.62"> Asi kune marudzi mazhinji emasora, >
< start="778.88" dur="1.82"> uye kune marudzi mazhinji emiedzo, >
< start="780.7" dur="1.76"> kune akawanda marudzi matambudziko. >
< start="782.46" dur="2.282"> Ivo vanouya muhukuru hwese, vanouya mumhando dzose. >
< start="784.742" dur="2.898"> Kune zvinopfuura makumi matatu nezvinonaka. >
< start="787.64" dur="2.75"> Iri izwi pano, marudzi ese, parinoti >
< start="790.39" dur="1.55"> kune marudzi ese emiedzo muhupenyu hwako, >
< start="791.94" dur="4.26"> izvo chaizvo muchiGreek zvinoreva multicolored. >
< start="796.2" dur="2.795"> Mune mamwe mazwi, kune akawanda emumvuri wekunetseka >
< start="798.995" dur="2.205"> muhupenyu hwako, ungabvumirana nazvo here? >
< start="801.2" dur="1.9"> Kune akawanda mimvuri yekushushikana. >
< start="803.1" dur="1.62"> Hazvitarise zvese zvakafanana. >
< start="804.72" dur="2.67"> Kune kushushikana mune zvemari, kune hukama hwehukama, >
< start="807.39" dur="2.37"> kune kushushikana kwehutano, kune kusagadzikana kwemuviri, >
< start="809.76" dur="1.62"> kune kushushikana kwenguva. >
< start="811.38" dur="5"> Ari kuti iwo ese akasiyana mavara. >
< start="816.41" dur="2.82"> Asi kana iwe ukabuda uye unotenga mota uye iwe uchida >
< start="819.23" dur="3.44"> ruvara rwetsika, saka iwe unofanirwa kumirira iyo. >
< start="822.67" dur="2.98"> Uyezve kana yagadzirwa, ipapo iwe unowana wako ruvara tsika. >
< start="825.65" dur="2.01"> Ndiro chaizvo izwi rinoshandiswa pano. >
< start="827.66" dur="4.99"> Iwo ruvara rwetsika, miyedzo yakawanda mune hwako hupenyu. >
< start="832.65" dur="2.14"> Mwari anovatendera nechikonzero. >
< start="834.79" dur="3.07"> Mamwe matambudziko ako akajairwa kuitwa. >
< start="837.86" dur="1.842"> Vamwe vacho isu tese takangotarisana, >
< start="839.702" dur="2.908"> seiyi, COVID-19. >
< start="842.61" dur="1.95"> Asi arikuti matambudziko anosiyana. >
< start="844.56" dur="2.845"> Uye zvandiri kureva nezvazvo ndezvinoita zvakasiyana mukukura. >
< start="847.405" dur="3.143"> Mune mamwe mazwi, zvakaoma sei ivo vanouya. >
< start="850.548" dur="3.792"> Dzakasiyana-siyana pakukwikwidzana, uye ndizvozvo. >
< start="854.34" dur="1.421"> Hatizive kuti izvi zvichaguma rinhi. >
< start="855.761" dur="2.699"> Hatizive kuti zvakaoma sei. >
< start="858.46" dur="2.197"> Ndakaona chiratidzo rimwe zuva rikati, >
< start="860.657" dur="3.98"> "Mune hupenyu hwese imwe mvura inonaya. >
< start="864.637" dur="2.743"> "asi izvi zvinopusa." (anoseka) >
< start="867.38" dur="1.9"> Uye ini ndinofunga kuti ndiyo nzira >
< start="869.28" dur="1.77"> vanhu vazhinji vari kunzwa izvozvi. >
< start="871.05" dur="1.92"> Uku kupusa. >
< start="872.97" dur="3.07"> Matambudziko haadzivirike uye anosiyana. >
< start="876.04" dur="2.86"> Zvinhu zvechitatu zvinotaurwa naJakobho kuti tisashamiswa >
< start="878.9" dur="2.87"> zvinetso hazvifungidziriki. >
< start="881.77" dur="1.6"> Ivo havana kufanofunga. >
< start="883.37" dur="4.01"> Anoti apo miedzo inosangana muhupenyu hwako, >
< start="887.38" dur="2.05"> kana iwe uchinge uchitora manotsi, tenderedza mutsara uyo. >
< start="889.43" dur="3.13"> Vanopindirana muhupenyu hwako. >
< start="892.56" dur="3.28"> Munoona, hapana dambudziko rinombouya kana iwe waririda >
< start="895.84" dur="1.6"> kana pausingade. >
< start="897.44" dur="1.97"> Zvinongouya kana zvoda kuuya. >
< start="899.41" dur="1.97"> Icho chikamu chechikonzero idambudziko. >
< start="901.38" dur="3.05"> Matambudziko anouya panguva isingafadzi kwazvo. >
< start="904.43" dur="1.582"> Wakambonzwa senge dambudziko here >
< start="906.012" dur="2.778"> yakauya muhupenyu hwako, iwe enda, kwete ikozvino. >
< start="908.79" dur="2.51"> Chaizvoizvo, senge ikozvino? >
< start="911.3" dur="3.82"> Kuno kuCaddleback Church, taive mushandirapamwe wakakura >
< start="915.12" dur="2.45"> kurota nezveramangwana. >
< start="917.57" dur="3.27"> Uye zvese zvakangoerekana zvaitika. >
< start="920.84" dur="2.06"> Uye ndiri kuenda, kwete izvozvi. >
< start="922.9" dur="1.673"> (chuckles) Kwete ikozvino. >
< start="926.75" dur="3.073"> Wati wambove uine tirera flat pawanonoka? >
< start="931.729" dur="2.361"> Iwe hautore tayara rakasununguka kana iwe uine nguva yakawanda. >
< start="934.09" dur="1.823"> Uri mukukasira kuenda kumwe. >
< start="937.12" dur="4.08"> Yakafanana neyevana masora pahembe yako itsva >
< start="941.2" dur="4.952"> paunenge uchifamba uchienda kunokosha rinokosha manheru. >
< start="946.152" dur="2.918"> Kana kuti unotsemura mabhurugwa ako usati wataura. >
< start="949.07" dur="2.55"> Izvo chaizvo zvakaitika kwandiri imwe nguva >
< start="951.62" dur="1.713"> paSvondo kare kare. >
< start="956" dur="4.64"> Vamwe vanhu, vanoshivirira, >
< start="960.64" dur="1.77"> havakwanise kumirira suo rinopfuurira. >
< start="962.41" dur="1.72"> Vanongowana, vanofanira kuzviita, >
< start="964.13" dur="2.38"> vanofanirwa kuzviita izvozvi, vanofanira kuzviita izvozvi. >
< start="966.51" dur="3.99"> Ndinoyeuka makore mazhinji apfuura ndiri muJapan, >
< start="970.5" dur="3.34"> uye ini ndakanga ndakamira pasitadhi yakamirira subway >
< start="973.84" dur="2.55"> kusvika, uye paakavhura, magonhi akazaruka, >
< start="976.39" dur="3.33"> uye jaya reJapan pakarepo >
< start="979.72" dur="4.49"> projectile yakarutsa pandiri pandakanga ndimire ipapo. >
< start="984.21" dur="5"> Uye ndakafunga, sei ini, sei ikozvino? >
< start="989.9" dur="3.583"> Ivo havafungidzirike, vanouya kana iwe usingade 'em. >
< start="994.47" dur="2.94"> Iwe haugone kufanotaura nezvematambudziko ari muhupenyu hwako. >
< start="997.41" dur="3.69"> Zvino tarisa, inoti kana marudzi ese emiedzo, riini, >
< start="1001.1" dur="3"> hazvibviri, marudzi ese, zvinosiyana, >
< start="1004.1" dur="3.98"> kuungana muhupenyu hwako, izvo hazvifungike, >
< start="1008.08" dur="3.213"> anoti usagumbuke sevatorwa. >
< start="1012.19" dur="1.01"> Ari kuti chii pano? >
< start="1013.2" dur="2.16"> Zvakanaka, ini ndiri kuzotsanangura izvi zvakadzama. >
< start="1015.36" dur="2.6"> Asi hechino chechina chinotaurwa neBhaibheri pamusoro pematambudziko. >
< start="1017.96" dur="2.553"> Matambudziko ane chinangwa. >
< start="1021.4" dur="2.69"> Matambudziko ane chinangwa. >
< start="1024.09" dur="3.07"> Mwari vane chinangwa mune zvese. >
< start="1027.16" dur="2.72"> Kunyangwe zvinhu zvakaipa zvinoitika muhupenyu hwedu, >
< start="1029.88" dur="2.16"> Mwari vanogona kuburitsa zvakanaka kubva mazviri. >
< start="1032.04" dur="1.64"> Mwari haafanire kukonzera dambudziko rese. >
< start="1033.68" dur="2.62"> Akawanda ematambudziko atinozvikonzera isu pachedu. >
< start="1036.3" dur="2.1"> Vanhu vanoti, nei vanhu vachirwara? >
< start="1038.4" dur="3.69"> Zvakanaka, chimwe chikonzero ndechekuti hatiite izvo Mwari anotiudza kuti tiite. >
< start="1042.09" dur="3.02"> Kana isu takadya izvo Mwari anotiudza tidye, >
< start="1045.11" dur="2.71"> kana isu takarara senge Mwari atiudza kuti tizorore, >
< start="1047.82" dur="3.28"> kana tichirovedza seizvo Mwari anotiudza kurovedza. >
< start="1051.1" dur="3.16"> kana isu tisingatenderi kusagadzikana pamoyo muhupenyu hwedu >
< start="1054.26" dur="2.06"> sekureva kunoita Mwari, kana isu toteerera Mwari, >
< start="1056.32" dur="2.65"> isu hatingazove nematambudziko edu mazhinji. >
< start="1058.97" dur="3.07"> Zvidzidzo zvakaratidza kuti inenge 80% yehutano hutano >
< start="1062.04" dur="3.57"> munyika ino, muAmerica, zvinokonzerwa nezvinonzi >
< start="1065.61" dur="3"> chisingaperi mararamiro sarudzo. >
< start="1068.61" dur="3.05"> Mune mamwe mazwi, isu hatingoite zvakanaka. >
< start="1071.66" dur="1.14"> Isu hatiite chinhu chine hutano. >
< start="1072.8" dur="2.66"> Tinowanzoita izvo zvinokuvadza-zvinokuvadza. >
< start="1075.46" dur="2.58"> Asi zvaari kutaura pano, matambudziko ane chinangwa. >
< start="1078.04" dur="3.53"> Anodaro paunosangana nematambudziko. >
< start="1081.57" dur="3.46"> ziva kuti vauya kuzogadzira. >
< start="1085.03" dur="3.56"> Tenderedza mutsara uyo, vanouya kuzogadzira. >
< start="1088.59" dur="3.22"> Matambudziko anogona kubereka. >
< start="1091.81" dur="2.23"> Zvino, ivo havana kungozvigadzira. >
< start="1094.04" dur="3.06"> Hutachiona hweCOVID uhwu, kana ndikasapindure nezuva chairo. >
< start="1097.1" dur="3.35"> hazvingaburitse chero chinhu chikuru muhupenyu hwangu. >
< start="1100.45" dur="2.17"> Asi kana ndikapindura nenzira kwayo. >
< start="1102.62" dur="2.25"> kunyangwe zvinhu zvisina kunaka zvakanyanya muhupenyu hwangu >
< start="1104.87" dur="3.89"> inogona kubereka kukura uye kubatsire uye kukomborera, >
< start="1108.76" dur="2.23"> muhupenyu hwako uye nehupenyu hwangu. >
< start="1110.99" dur="2.26"> Vauya kuzogadzira. >
< start="1113.25" dur="4.59"> Ari kutaura pano kutambudzika nekushushikana >
< start="1117.84" dur="5"> uye kusuwa, ehe, uye kunyange kurwara kunogona kuzadza chimwe chinhu >
< start="1123.42" dur="2.913"> kukosha kana tikazvirega. >
< start="1127.363" dur="3.887"> Izvo zvese mune yedu sarudzo, zvese zviri mumaonero edu. >
< start="1131.25" dur="4.043"> Mwari vanoshandisa zvikukutu muhupenyu hwedu. >
< start="1136.9" dur="2.33"> Iwe unoti, zvakanaka, anozviita sei izvozvo? >
< start="1139.23" dur="4.04"> Mwari anoshandisa sei matambudziko nematambudziko muhupenyu hwedu? >
< start="1143.27" dur="3.29"> Zvakanaka, ndinotenda nekubvunza, nekuti ndima inotevera >
< start="1146.56" dur="1.75"> kana chikamu chinotevera chemavhesi acho chinodaro >
< start="1148.31" dur="2.61"> kuti Mwari anoshandisa iwo matatu nzira. >
< start="1150.92" dur="3.09"> Nzira nhatu, Mwari anoshandisa matambudziko muhupenyu hwako nzira nhatu. >
< start="1154.01" dur="4.18"> Kutanga, matambudziko anoidza kutenda kwangu. >
< start="1158.19" dur="2.03"> Zvino, kutenda kwako kwakafanana nemuswe. >
< start="1160.22" dur="3.8"> Muswe haugone kusimbiswa kunze kwekunge waedzwa, >
< start="1164.02" dur="3.3"> kunze kwekunge yakatambanudzwa, kunze kwekunge yaiswa pasi pekumanikidzwa. >
< start="1167.32" dur="4.99"> Iwe haugadzire mhasuru dzakasimba nekusaita chero chinhu. >
< start="1172.31" dur="3.09"> Unokudziridza tsandanyama dzakasimba nokuvatambanudza >
< start="1175.4" dur="2.53"> uye kuvasimbisa uye kuvayedza >
< start="1177.93" dur="2.7"> uye kuvasundira kusvikira kumagumo. >
< start="1180.63" dur="5"> Saka arikuti matambudziko auye kuzoedza kutenda kwangu. >
< start="1185.88" dur="4.38"> Anoti ziva kuti vanouya kuzoedza kutenda kwako. >
< start="1190.26" dur="3.28"> Zvino, iro izwi rekuyedza ipapo, icho chirefu >
< start="1193.54" dur="5"> munguva dzeBhaibheri dzaishandiswa kunatsa simbi. >
< start="1198.61" dur="3.05"> Uye zvawaizoita ndezvekuti iwe unotora simbi yakakosha >
< start="1201.66" dur="1.768"> sirivha kana goridhe kana chimwe chinhu, >
< start="1203.428" dur="2.932"> uye waizoisa muhari hombe, uye waidzipisa >
< start="1206.36" dur="2.54"> pakunyanyisa kupisa, nei? >
< start="1208.9" dur="1.17"> Mukudziya kukuru, >
< start="1210.07" dur="3.34"> zvese zvakasviba zvatsvairwa. >
< start="1213.41" dur="4.05"> Uye chinhu chimwe chasara igoridhe rakachena >
< start="1217.46" dur="1.946"> kana sirivheri yakachena. >
< start="1219.406" dur="3.164"> Ndiro izwi reChigiriki pano rekuyedza. >
< start="1222.57" dur="4.54"> Iyo ndiyo moto inonatsa apo Mwari paanoisa kupisa >
< start="1227.11" dur="1.705"> uye tinobvumira izvozvo muhupenyu hwedu, >
< start="1228.815" dur="3.345"> inopisa zvinhu zvisina basa. >
< start="1232.16" dur="2.94"> Unoziva chii chichaitika mumavhiki anotevera? >
< start="1235.1" dur="2.134"> Stuff yataifunga zvese yaikosha, >
< start="1237.234" dur="1.726"> tiri kuzoziva, hmm, ndakabatana >
< start="1238.96" dur="1.273"> ndizvozvo pasina izvozvo. >
< start="1241.1" dur="2.51"> Kuri kuzotangazve zvatinokoshesa, >
< start="1243.61" dur="2.41"> nekuti zvinhu zvichachinja. >
< start="1246.02" dur="4.22"> Zvino, iwo muenzaniso wemhando yekuti matambudziko anoedza sei kutenda kwako >
< start="1251.17" dur="4.02"> idzo nyaya dziri pamusoro paJobho mubhaibheri. >
< start="1255.19" dur="1.75"> Pane bhuku rese raJobho. >
< start="1256.94" dur="3.49"> Munoziva, Jobho akange ari murume akapfuma kwazvo muBhaibheri, >
< start="1260.43" dur="2.74"> uye muzuva rimwe chete, akarasikirwa nezvose. >
< start="1263.17" dur="2.82"> Akarasikirwa nemhuri yake yose, akarasikirwa nefuma yake yose, >
< start="1265.99" dur="3.97"> akarasikirwa neshamwari dzake dzose, magandanga akarwisa mhuri yake, >
< start="1269.96" dur="4.567"> akarwara nechirwere chisingaperi >
< start="1276.283" dur="3.437"> izvo zvaitadza kurapwa. >
< start="1279.72" dur="1.323"> Zvakanaka, iye ari terminal. >
< start="1282.109" dur="3.721"> Uye zvakadaro Mwari aive achiidza kutenda kwake. >
< start="1285.83" dur="3.27"> Uye Mwari anozodzorera iye zvakapetwa kaviri >
< start="1289.1" dur="3.423"> izvo zvaakanga anazvo asati apfuura muedzo mukuru. >
< start="1293.59" dur="2.82"> Pane imwe nguva ndakaverenga kuverenga kune imwe nzvimbo kare kare >
< start="1296.41" dur="2.92"> izvo zvakati vanhu vakaita kunge matumba etii. >
< start="1299.33" dur="1.34"> Iwe haunyatsoziva zviri 'em >
< start="1300.67" dur="2.67"> kusvikira iwe wadonha mumvura inopisa. >
< start="1303.34" dur="3.09"> Uye ipapo unogona kuona izvo chaizvo mukati mavo. >
< start="1306.43" dur="2.77"> Wakambove newe rimwe remazuva anopisa emvura here? >
< start="1309.2" dur="3.763"> Wakambove neimwe yemavhiki emvura anopisa kana mwedzi here? >
< start="1313.82" dur="3.78"> Tiri mumvura inopisa mamiriro izvozvi. >
< start="1317.6" dur="2.41"> Uye chii chave kuzobuda mauri ndizvo zviri mukati mako. >
< start="1320.01" dur="1.33"> Zvinoita kunge mazino. >
< start="1321.34" dur="4.15"> Kana ndiine mazino chubu uye ini ndinosundidzira, >
< start="1325.49" dur="1.18"> chii chave kubuda? >
< start="1326.67" dur="0.9"> Iwe unoti, zvakanaka, mazino. >
< start="1327.57" dur="1.65"> Kwete, kwete hazvo. >
< start="1329.22" dur="1.95"> Inogona kutaura mazino ekunze, >
< start="1331.17" dur="1.67"> asi inogona kunge ine marinara mchero >
< start="1332.84" dur="2.6"> kana peanut butter kana mayonnaise mukati. >
< start="1335.44" dur="2.92"> Chii chinobuda kunze kana chakaiswa pasi pekumanikidzwa >
< start="1338.36" dur="1.403"> chero zvirimo. >
< start="1341.13" dur="3.603"> Uye mumazuva ari pamberi apo paunobata nehutachiona hweCOVID, >
< start="1346.266" dur="2.224"> chii chave kubuda mauri ndizvo zviri mukati mako. >
< start="1348.49" dur="2.24"> Uye kana iwe uchizadzwa neshungu, izvo zvinobuda. >
< start="1350.73" dur="2.23"> Uye kana iwe uchizadzwa nekushushikana, izvo zvinobuda. >
< start="1352.96" dur="3.79"> Uye kana iwe uchizadzwa nehasha kana kunetseka kana mhosva >
< start="1356.75" dur="3.46"> kana kunyara kana kusagadzikana, izvo zvichabuda. >
< start="1360.21" dur="4"> Kana iwe uchizadzwa nekutya izvo, chero zviri mukati mako >
< start="1364.21" dur="3.52"> chii chinobuda kunze kwekumanikidzwa pauri? >
< start="1367.73" dur="1.44"> Uye ndizvo zvaari kutaura pano, >
< start="1369.17" dur="2.23"> idzo matambudziko anoidza kutenda kwangu. >
< start="1371.4" dur="5"> Unoziva, makore apfuura, ndakasangana nemurume akura chaizvo >
< start="1376.98" dur="3.23"> mumusangano makore mazhinji apfuura kumashure kuEast. >
< start="1380.21" dur="1.74"> Ndinofunga aive Tennessee. >
< start="1381.95" dur="3.91"> Uye iye, murume uyu akura andiudza magariro >
< start="1387.13" dur="4.8"> akabatsirwa zvakanyanya muhupenyu hwake. >
< start="1391.93" dur="2.017"> Uye ini ndakati, "Zvakanaka, ndinoda kunzwa nyaya iyi." >
< start="1393.947" dur="1.523"> "Ndiudze zvese nezvazvo." >
< start="1395.47" dur="1.67"> Uye kuti chaive chii chaakange ashanda >
< start="1397.14" dur="2.823"> pakuwaridza huni hupenyu hwake hwese. >
< start="1400.83" dur="2.41"> Aive ari muvezi wemaroni kwehupenyu hwake hwese. >
< start="1403.24" dur="3.34"> Asi rimwe zuva panguva yekuderera kwehupfumi, >
< start="1406.58" dur="3.607"> sahwira wake akapinda mukati ndokuerekana azivisa, "Wadzingwa." >
< start="1411.19" dur="3.54"> Uye hunyanzvi hwake hwese akabuda pamusuwo. >
< start="1414.73" dur="4.62"> Uye akaradzikwa aine makore makumi mana ekuzvarwa nemukadzi >
< start="1419.35" dur="3.85"> uye mhuri uye hapana mamwe mikana yebasa yakamupoteredza, >
< start="1423.2" dur="2.923"> uye kuderera kwezvinhu kuri kuitika panguva iyoyo. >
< start="1427.03" dur="3.5"> Uye akaora mwoyo, uye akatya. >
< start="1430.53" dur="1.77"> Vamwe vako vanganzwa saizvozvo izvozvi. >
< start="1432.3" dur="1.58"> Iwe unogona kunge watove wakaraswa kare. >
< start="1433.88" dur="1.76"> Zvimwe uri kutya kuti uchave >
< start="1435.64" dur="2.63"> kurara pasi panguva yeKutambudzika uku. >
< start="1438.27" dur="2.45"> Uye akange akaora mwoyo, aive akanaka pakutya. >
< start="1440.72" dur="1.827"> Iye akati, Ndanyora izvi pasi, akati, "Ndakaita senge >
< start="1442.547" dur="3.97"> "nyika yangu yakabaira nezuva randakadzingwa." >
< start="1446.517" dur="2.2"> "Asi ini pandakaenda kumba, ndakaudza mukadzi wangu zvakaitika, >
< start="1448.717" dur="3.57"> "akabvunza," Saka urikuitei manje? " >
< start="1452.287" dur="2.98"> "Uye ini ndati, saka kubvira pandakadzingwa," >
< start="1455.267" dur="3.9"> "Ndiri kuita izvo zvandagara ndichida kuita." >
< start="1459.167" dur="1.84"> "Iva anovaka. >
< start="1461.007" dur="1.61"> "Ndiri kuenda kumba imba yedu." >
< start="1462.617" dur="2.413"> "uye ndiri kuenda mubhizinesi rekuvaka." >
< start="1465.03" dur="2.887"> Uye akandiudza, "Unoziva, Rick, yangu yekutanga basa." >
< start="1467.917" dur="4.13"> "Kwaive kugadzirwa kwemotel maviri madiki." >
< start="1472.965" dur="2.115"> Ndozvakaita iye. >
< start="1475.08" dur="4.267"> Asi akati, "Mukati memakore mashanu, ndakanga ndiri mamirioni mazhinji." >
< start="1480.21" dur="2.99"> Iro zita remurume iyeye, murume wandaitaura naye, >
< start="1483.2" dur="3.5"> aive Wallace Johnson, uye bhizinesi raakatanga >
< start="1486.7" dur="4.39"> mushure mekudzingwa yakanzi Holiday Inns. >
< start="1492.53" dur="2.877"> Wallace akandiudza, "Rick, nhasi, kana ndichigona kuwana >
< start="1495.407" dur="3.13"> "murume akandidzinga, ndaida nemoyo wese." >
< start="1498.537" dur="2.143"> "titende nezvaakaita." >
< start="1500.68" dur="2.56"> Panguva iyoyo pazvakaitika, ini handina kunzwisisa >
< start="1503.24" dur="2.83"> Nei ndakadzingwa, nei ndakadzingwa. >
< start="1506.07" dur="3.94"> Asi ndakazongoona pava paya kuti kwaive kusanganisa kwaMwari >
< start="1510.01" dur="4.483"> uye chinoshamisa chirongwa chekuti andiise pabasa rekusarudza kwake. >
< start="1515.76" dur="3.05"> Matambudziko ane chinangwa. >
< start="1518.81" dur="1.17"> Ivo vane chinangwa. >
< start="1519.98" dur="4.18"> Ziva kuti vanouya kuzogadzira, uye chimwe chezvinhu zvekutanga >
< start="1524.16" dur="3.984"> vanogadzira kutenda kukuru, vanoedza kutenda kwako. >
< start="1528.144" dur="3.226"> Nhamba yechipiri, heyi yechipiri kubatsirwa kwezvinetso. >
< start="1531.37" dur="3.27"> Matambudziko anovandudza kutsungirira kwangu. >
< start="1534.64" dur="1.52"> Ivo vanokudziridza kutsungirira kwangu. >
< start="1536.16" dur="2.23"> Ndicho chikamu chinotevera chemitsara, chinodaro >
< start="1538.39" dur="5"> matambudziko aya anouya kukudziridza kutsungirira. >
< start="1543.45" dur="2.33"> Ivo vanokudziridza kutsungirira muhupenyu hwako. >
< start="1545.78" dur="1.91"> Ndeipi mhedzisiro yezvinetso muhupenyu hwako? >
< start="1547.69" dur="1.52"> Kugara simba. >
< start="1549.21" dur="2.82"> Chaizvoizvo kugona kubata kumanikidzwa. >
< start="1552.03" dur="2.253"> Nhasi tinozvidaidza kuti resilience. >
< start="1555.12" dur="1.79"> Kugona kukwirira kumashure. >
< start="1556.91" dur="3.197"> Uye humwe hwehunhu hukuru hunofanirwa nemwana wese kuti adzidze >
< start="1560.107" dur="3.473"> uye munhu wese mukuru anofanira kudzidza kusimba. >
< start="1563.58" dur="2.92"> Nekuti munhu wese anowa, munhu wese anogumburwa, >
< start="1566.5" dur="2.05"> munhu wese anofamba nenguva yakaoma, >
< start="1568.55" dur="3.31"> munhu wese anorwara panguva dzakasiyana. >
< start="1571.86" dur="2.39"> Wese munhu ane kukundikana muhupenyu hwavo. >
< start="1574.25" dur="2.7"> Ndoita sei iwe kubata. >
< start="1576.95" dur="3.613"> Kutsungirira, iwe unoramba uchingopfuurira uye uchisendamira. >
< start="1581.52" dur="1.99"> Zvakanaka, iwe unodzidza sei kuita izvozvo? >
< start="1583.51" dur="3.53"> Unodzidza sei kubata nekumanikidzwa? >
< start="1587.04" dur="2.28"> Kuburikidza nezviitiko, ndiyo chete nzira. >
< start="1589.32" dur="4.93"> Iwe haudzidze kubata kumanikidzwa mune zvinyorwa. >
< start="1594.25" dur="4.02"> Iwe haudzidze kubata kwekumanikidza mumusangano. >
< start="1598.27" dur="3.76"> Iwe unodzidza kubata kumanikidzwa nekuiswa pasi pekumanikidzwa. >
< start="1602.03" dur="2.53"> Uye hauzive zviri mauri >
< start="1604.56" dur="3.063"> kusvikira iwe wanyatso kuiswa mumamiriro ezvinhu akadaro. >
< start="1609.77" dur="2.7"> Mugore rechipiri reSaddleback Church, 1981, >
< start="1612.47" dur="1.36"> Ndakapfuura nenguva yekushushikana >
< start="1613.83" dur="2.823"> ipo vhiki yega yega ndaida kusiya basa. >
< start="1617.64" dur="3.88"> Uye ndaida kurega wega wega Svondo masikati. >
< start="1621.52" dur="3.14"> Uye zvakadaro, ndakanga ndiri kuenda munguva yakaoma muhupenyu hwangu, >
< start="1624.66" dur="2.3"> uye zvakadaro ndaigona kuisa tsoka imwe pamberi peimwe >
< start="1626.96" dur="3.19"> saMwari, usanditorere kuvaka chechi yakanaka, >
< start="1630.15" dur="1.973"> asi Mwari, ndipeiwo vhiki rino. >
< start="1633.01" dur="2.1"> Uye ini ndaingoramba. >
< start="1635.11" dur="2.22"> Ndiri kufara kuti handina kukanda mapfumo pasi. >
< start="1637.33" dur="3.09"> Asi ndinotonyanya kufara kuti Mwari havana kundisiya. >
< start="1640.42" dur="1.46"> Nekuti icho chaive muyedzo. >
< start="1641.88" dur="5"> Uye mukati megore iro remuyedzo, ndakakura mune mumweya >
< start="1647.51" dur="3.56"> uye hukama uye hwepamoyo uye hwepfungwa simba >
< start="1651.07" dur="4.28"> zvakandibvumidza makore gare gare kuti ndigunde mabhora emarudzi ese >
< start="1655.35" dur="4.64"> uye kubata kwakakura kusagadzikana muziso revanhu >
< start="1659.99" dur="2.01"> nekuti ndakaenda mugore iro >
< start="1662" dur="3.363"> yepa flat kunze kwakaoma, imwe mushure meimwe. >
< start="1666.51" dur="5"> Iwe unoziva, America yakave nerudo rwekufambidzana neyakareruka. >
< start="1672.57" dur="2.113"> Tinoda zviri nyore. >
< start="1675.593" dur="3.187"> Mumazuva uye mavhiki ari pamberi padambudziko iri, >
< start="1678.78" dur="2.58"> pane zvichave zvinhu zvakawanda zvisingafadzi. >
< start="1681.36" dur="1.13"> Kuvhiringidza. >
< start="1682.49" dur="2.95"> Uye chii chatiri kuita isu pachedu >
< start="1685.44" dur="2.503"> kana zvese zvisina kugadzikana, >
< start="1688.96" dur="2.52"> kana iwe uchingofanira kuramba uchingopfuurira mberi >
< start="1691.48" dur="2.1"> pausinganzwe uchida kuramba uchienderera. >
< start="1693.58" dur="5"> Munoziva, chinangwa chetrathlon kana chinangwa chemarathon >
< start="1698.71" dur="3.1"> Hazvisi zvekumhanyisa, kuti unosvika sei ipapo, >
< start="1701.81" dur="1.86"> zviri pamusoro pekutsungirira. >
< start="1703.67" dur="2.34"> Unopedza mujaho here? >
< start="1706.01" dur="2.43"> Iwe unogadzirira sei iyo mhando dzezvinhu? >
< start="1708.44" dur="2.13"> Kupfuura chete kuburikidza navo. >
< start="1710.57" dur="3.487"> Saka kana watambanudzwa mumazuva anotevera. >
< start="1714.057" dur="2.213"> usazvinetsa nezvazvo, usazvidya moyo nazvo. >
< start="1716.27" dur="3.02"> Matambudziko anovandudza kutsungirira kwangu. >
< start="1719.29" dur="3.21"> Matambudziko ane chinangwa, ane chinangwa. >
< start="1722.5" dur="2.6"> Chinhu chechitatu icho James anotiudza nezvematambudziko >
< start="1725.1" dur="3.68"> isu tinoenderera tichidaro kuti matambudziko anokura hunhu hwangu. >
< start="1728.78" dur="3.68"> Uye anoti izvi mundima ina yaJakobho chitsauko chimwe. >
< start="1732.46" dur="4.18"> Anoti asi, regai izvo zvienderere mberi >
< start="1736.64" dur="4.49"> kutozosvikira mava vanhu vane hunhu hwakakura >
< start="1741.13" dur="3.663"> uye kuvimbika pasina mavara asina kusimba. >
< start="1746.3" dur="1.32"> Haungadi here kuva nazvo? >
< start="1747.62" dur="2.42"> Haudi here kunzwa vanhu vachiti, iwe unoziva, >
< start="1750.04" dur="3.32"> mukadzi iyeye haana kana husina kusimba muhunhu hwake. >
< start="1753.36" dur="4.53"> Iye murume, murume iyeye haana kana asina kusimba mavara emunhu. >
< start="1757.89" dur="3.04"> Iwe unowana sei iwo rudzi rwehuunhu hwakasimba? >
< start="1760.93" dur="4.58"> Rega chiitiko chienderere mberi kusvikira waita vanhu, >
< start="1765.51" dur="3.38"> varume nevakadzi, vane hunhu hwakasimba >
< start="1768.89" dur="3.33"> uye kuvimbika pasina mavara asina kusimba. >
< start="1772.22" dur="2.6"> Munoziva, pane yakakurumbira ongororo yakaitwa yakawanda, >
< start="1774.82" dur="4"> makore mazhinji apfuura muRussia yandinoyeuka ichinyora, >
< start="1778.82" dur="4.08"> uye yaive pamhedzisiro yemaitiro akasiyana emararamiro >
< start="1782.9" dur="5"> zvakakanganisa kureba kana hupenyu hwehupenyu hwemhuka dzakasiyana. >
< start="1789.11" dur="3.6"> Uye saka vanoisa dzimwe mhuka muhupenyu hwakareruka, >
< start="1792.71" dur="2.91"> uye vanoisa dzimwe mhuka mune zvakanyanya kuomesa >
< start="1795.62" dur="1.89"> nenzvimbo dzakaipisisa. >
< start="1797.51" dur="2.87"> Uye masayendisiti akawana kuti mhuka >
< start="1800.38" dur="2.22"> izvo zvakaiswa mune yakasununguka >
< start="1802.6" dur="2.88"> uye nzvimbo dziri nyore, mamiriro, >
< start="1805.48" dur="4.73"> iwo mararamiro ehupenyu, chaizvo akave asina kusimba. >
< start="1810.21" dur="4.41"> Nekuda kwekuti magariro akange ari nyore, vakave vasina simba >
< start="1814.62" dur="2.22"> uye kukurumidza kupinda nechirwere. >
< start="1816.84" dur="5"> Uye avo vaive vakadzikama vakafa munguva pfupi >
< start="1821.9" dur="2.418"> pane avo vaitenderwa kusangana >
< start="1824.318" dur="3.105"> matambudziko akajairwa neupenyu. >
< start="1828.72" dur="1.163"> Izvo hazvifadze here? >
< start="1830.81" dur="2.2"> Zviri chokwadi mhuka ndine chokwadi ichokwadi >
< start="1833.01" dur="1.94"> zvehunhu hwedu, futi. >
< start="1834.95" dur="4.92"> Uye mutsika yekuMadokero kunyanya munyika yanhasi. >
< start="1839.87" dur="3.38"> takave nazvo zviri nyore nenzira dzakawanda. >
< start="1843.25" dur="1.973"> Kurarama hupenyu hwekureruka. >
< start="1846.94" dur="1.71"> Chikamu chikuru cheupenyu hwako muhupenyu hwako >
< start="1848.65" dur="2.67"> kukuita iwe uve saJesu Kristu mune hunhu. >
< start="1851.32" dur="1.87"> Kufunga saKristu, kuita saKristu, >
< start="1853.19" dur="3.94"> kurarama saKristu, kuda saKristu, >
< start="1857.13" dur="2.2"> kuva akanaka saKristu. >
< start="1859.33" dur="3.62"> Uye kana chiri chokwadi, uye Bhaibheri rinotaura izvi kakawanda, >
< start="1862.95" dur="2.13"> ipapo Mwari anozokutora iwe kuburikidza nezvinhu zvimwe chete >
< start="1865.08" dur="4.304"> izvo Jesu akapfuura kuti akure hunhu hwako. >
< start="1869.384" dur="2.786"> Iwe unoti, zvakanaka, Jesu akaita sei? >
< start="1872.17" dur="3.8"> Jesu rudo uye mufaro nerunyararo nemoyo murefu nemutsa, >
< start="1875.97" dur="2.34"> muchero weMweya, izvo zvinhu zvese izvo. >
< start="1878.31" dur="1.4"> Uye Mwari anozvigadzira sei izvo? >
< start="1879.71" dur="2.9"> Nekutiisa mune zvakapesana. >
< start="1882.61" dur="3.76"> Tinodzidza kushivirira kana tichiedzwa kusashivirira. >
< start="1886.37" dur="3.37"> Isu tinodzidza rudo kana takaiswa nevanhu vasina rudo. >
< start="1889.74" dur="2.49"> Isu tinodzidza mufaro mukati mekusuwa. >
< start="1892.23" dur="4.67"> Isu tinodzidza kumirira uye kuva nemhando iyoyo yekutsungirira >
< start="1896.9" dur="1.56"> kana tichifanira kumirira. >
< start="1898.46" dur="3.423"> Tinodzidza mutsa kana tichiedzwa kuva noudyire. >
< start="1902.77" dur="3.66"> Mumazuva ari pamberi, iko kuzenge kuri kuedza kwazvo >
< start="1906.43" dur="2.83"> kungo tsvaga mushop, ndokukwevera mukati, >
< start="1909.26" dur="2.54"> uye ini ndakati, tiri kuzotitarisira. >
< start="1911.8" dur="4.22"> Ini, pachezvangu, uye neni, mhuri yangu, isu vana uye kusapfuura >
< start="1916.02" dur="2.14"> uye kanganwa nezvevamwe vese. >
< start="1918.16" dur="2.62"> Asi izvo zvinodzikisira mweya wako. >
< start="1920.78" dur="2.51"> Kana iwe uchizotanga kufunga nezve vamwe vanhu >
< start="1923.29" dur="3.254"> uye kubatsira avo vari vasina kuchengetedzeka, vakuru >
< start="1926.544" dur="4.026"> uye avo vane preexisting mamiriro, >
< start="1930.57" dur="3.47"> uye kana iwe ukavavarira, mweya wako uchakura. >
< start="1934.04" dur="3.34"> mwoyo wako uchakura, iwe uchave uri munhu ari nani >
< start="1937.38" dur="5"> pakupera kwedambudziko iri kupfuura zvawaive pakutanga, zvakanaka? >
< start="1943.52" dur="2.98"> Unoona, Mwari, pavanoda kuvaka hunhu hwako, >
< start="1946.5" dur="1.37"> anogona kushandisa zvinhu zviviri. >
< start="1947.87" dur="2.92"> Anogona kushandisa Shoko rake, chokwadi chinotishandura, >
< start="1950.79" dur="3.56"> uye anogona kushandisa mamiriro, ayo akaoma zvakanyanya. >
< start="1954.35" dur="4"> Zvino, Mwari vangasarudza kushandisa nzira yekutanga, iro Shoko. >
< start="1958.35" dur="1.63"> Asi isu hatigaro teerera kuIzwi, >
< start="1959.98" dur="3.77"> saka anoshandisa mamiriro ezvinhu kuti atipe hanya. >
< start="1963.75" dur="4.6"> Uye zvakanyanya kuoma, asi kazhinji zvinonyanya kushanda. >
< start="1968.35" dur="3.23"> Zvino, iwe unoti, zvakanaka, zvakanaka, Rick, ndinowana, >
< start="1971.58" dur="4.22"> kuti matambudziko anosiyana uye ane chinangwa, >
< start="1975.8" dur="3.18"> uye vari pano kuti vaedze kutenda kwangu, uye ivo vachazove >
< start="1978.98" dur="2.47"> marudzi ese akasiyana, uye haauye pandiri kuda 'em. >
< start="1981.45" dur="4.393"> Uye Mwari vanogona kushandisa 'em kukurisa hunhu hwangu uye nekuvandudza hupenyu hwangu. >
< start="1986.95" dur="1.72"> Saka chii chandinofanirwa kuita? >
< start="1988.67" dur="4.94"> Mumazuva mashoma anotevera uye mumavhiki uye pamwe mwedzi iri pamberi >
< start="1993.61" dur="3.75"> apo isu takatarisana nedambudziko re coronavirus iri pamwe, >
< start="1997.36" dur="4.09"> ndinofanira kuita sei kumatambudziko muhupenyu hwangu? >
< start="2001.45" dur="1.98"> Uye handisi kungotaura nezveutachiona. >
< start="2003.43" dur="2.747"> Ndiri kutaura nezve matambudziko achauya semhedzisiro >
< start="2006.177" dur="5"> kwekuva kunze kwebasa kana vana vari kumba >
< start="2011.26" dur="3.12"> kana zvimwe zvinhu zvese zviri kushungurudza hupenyu >
< start="2014.38" dur="1.553"> sezvazvinowanzoitika. >
< start="2017.04" dur="2.24"> Ndinofanira kuita sei kumatambudziko ehupenyu hwangu? >
< start="2019.28" dur="2.9"> Zvakanaka, zvakare, James akatsanangudza chaizvo, >
< start="2022.18" dur="3.39"> uye anotipa matatu anoshanda kwazvo. >
< start="2025.57" dur="4.45"> iwo anopindirana mhinduro, asi ndiwo mhinduro dzakakodzera. >
< start="2030.02" dur="1.32"> Naizvozvo, kana ini ndikakuudza wekutanga, >
< start="2031.34" dur="2.21"> urikuenda, unofanirwa kunge uchindibata mbichana. >
< start="2033.55" dur="3.07"> Asi pane mhinduro nhatu, dzese dzinotanga naR. >
< start="2036.62" dur="2.76"> Mhinduro yekutanga yaanoti kana iwe uri >
< start="2039.38" dur="4.46"> vachipfuura nenguva yakaoma, fara. >
< start="2043.84" dur="2.41"> Iwe enda, uri kutamba here? >
< start="2046.25" dur="1.73"> Izvo zvinonzwika kutyisa. >
< start="2047.98" dur="2.29"> Handisi kutaura kufara pamusoro pechinetso. >
< start="2050.27" dur="1.69"> Nditevere pane izvi kweminiti chete. >
< start="2051.96" dur="3.54"> Anoti chiona icho chakachena mufaro. >
< start="2055.5" dur="2.69"> Bata matambudziko aya seshamwari. >
< start="2058.19" dur="1.78"> Zvino, usandinzwisisa. >
< start="2059.97" dur="3.14"> Iye haasi kutaura zvisiri izvo. >
< start="2063.11" dur="3.57"> Iye haasi kutaura pfeka purasitiki kunyemwerera, >
< start="2066.68" dur="2.33"> kunyepedzera kuti zvinhu zvese zvakanaka uye hazvina, >
< start="2069.01" dur="1.36"> nekuti handizvo. >
< start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, Little Orphan Annie, zuva >
< start="2073.49" dur="3.512"> ichabuda mangwana, ingangobuda mangwana. >
< start="2077.002" dur="3.568"> Iye haasi kutaura kuramba chokwadi, kana zvachose. >
< start="2080.57" dur="2.76"> Iye haasi kutaura kuva anochist. >
< start="2083.33" dur="2.87"> Ah mukomana, ndinofanira kupfuura nekurwadziwa. >
< start="2086.2" dur="1.72"> Mwari anovenga kurwadziwa zvakanyanya sezvaunoita. >
< start="2087.92" dur="2.1"> O, ini ndinofanira kutambudzika, ndiani. >
< start="2090.02" dur="3.49"> Uye iwe une kuuraya uku, uye iwe unoziva, >
< start="2093.51" dur="1.937"> Ini ndinongova nekunzwa uku kwemweya kana ini ndonzwa zvakaipa. >
< start="2095.447" dur="2.983"> Aiwa, aiwa, aiwa, Mwari haadi kuti iwe uve muurayi. >
< start="2098.43" dur="1.54"> Mwari havadi kuti uwane >
< start="2099.97" dur="3.453"> maonero ekuona kurwadziwa. >
< start="2104.74" dur="2.5"> Unoziva, ndinorangarira imwe nguva yandakanga ndichidarika >
< start="2107.24" dur="3.21"> nguva yakaoma chaizvo uye shamwari yakanga ichiedza kuva nemutsa >
< start="2110.45" dur="2.307"> Ivo ndokuti: Unoziva, Rick, simbisa moyo >
< start="2112.757" dur="1.86"> "nekuti zvinhu zvinogona kutowedzera." >
< start="2115.61" dur="2.14"> Uye fungidzira chii, ivo vakawedzera kukuvara. >
< start="2117.75" dur="2.23"> Izvo zvaive zvisiri kubatsira zvachose. >
< start="2119.98" dur="2.225"> Ini ndakafara uye ivo vakawedzera kukuvara. >
< start="2123.31" dur="4.588"> Saka hazvisi zvekunyepedzera Pollyanna mafungiro akanaka. >
< start="2127.898" dur="3.352"> Kana ndikashanda nesimba, ndichave ndinofarira. >
< start="2131.25" dur="2.88"> Kwete, kwete, kwete, kwete, zvakanyanya, zvakadzama kupfuura ipapo. >
< start="2134.13" dur="5"> Hatifarire, teerera, isu hatifarire nekuda kwedambudziko. >
< start="2140.17" dur="5"> Isu tinofara mudambudziko, tichiri mudambudziko, >
< start="2145.71" dur="2.13"> pachine zvinhu zvakawanda zvekufara pamusoro pazvo. >
< start="2147.84" dur="2.92"> Kwete dambudziko iro roga, asi zvimwe zvinhu >
< start="2150.76" dur="2.514"> kuti isu tinogona kufara nezvazvo mumatambudziko. >
< start="2153.274" dur="2.836"> Nei tichigona kufara kunyange padambudziko? >
< start="2156.11" dur="2.54"> Nekuti tinoziva kuti kune chinangwa nazvo. >
< start="2158.65" dur="1.74"> Nekuti tinoziva kuti Mwari haazombotisiyi. >
< start="2160.39" dur="2.97"> Nekuti isu tinoziva zvakawanda zvakasiyana zvinhu. >
< start="2163.36" dur="1.81"> Isu tinoziva kuti Mwari vane chinangwa. >
< start="2165.17" dur="4.58"> Cherekedza anoti anoti chiona mufaro wakachena. >
< start="2169.75" dur="1.98"> Tenderedza izwi rinoti. >
< start="2171.73" dur="4.8"> Funga zvinoreva kugadzira nemaune pfungwa dzako. >
< start="2176.53" dur="2.22"> Iwe une maitiro ekugadzirisa >
< start="2178.75" dur="1.71"> kuti iwe uchafanirwa kugadzira pano. >
< start="2180.46" dur="3.869"> Iko kusarudza kwako kufara? >
< start="2184.329" dur="3.201"> MuPisarema 34 vhesi yekutanga, anodaro >
< start="2187.53" dur="3.69"> Ndicharumbidza Mwari nguva dzose. >
< start="2191.22" dur="1.39"> Nguva dzose. >
< start="2192.61" dur="0.92"> Uye anoti ndicha. >
< start="2193.53" dur="2.48"> Iko kusarudza kwemakuda, chisarudzo. >
< start="2196.01" dur="1.66"> Kuzvipira, sarudzo. >
< start="2197.67" dur="4.08"> Zvino, uri kuenda kuburikidza mwedzi ino pamberi >
< start="2201.75" dur="2.4"> neine maitiro akanaka kana maitiro akaipa. >
< start="2204.15" dur="2.7"> Kana maitiro ako akaipa, unozozvigadzira >
< start="2206.85" dur="2.35"> nevamwe vese vakakukomberedza vakasuwa. >
< start="2209.2" dur="3.15"> Asi kana chimiro chako chakanaka, chisarudzo chako kuti ufare. >
< start="2212.35" dur="1.76"> Iwe unoti, ngatitarisei kudivi rakajeka. >
< start="2214.11" dur="3.09"> Ngatitsvagei zvinhu izvo zvatinogona kutenda Mwari nazvo. >
< start="2217.2" dur="2.15"> Uye ngatizivei kuti kunyange pane zvakaipa, >
< start="2219.35" dur="2.88"> Mwari anogona kuburitsa zvakanaka pane zvakaipa. >
< start="2222.23" dur="2.29"> Saka ita mafungiro ekugadzirisa. >
< start="2224.52" dur="3.25"> Handisi kuzova neshungu panhamo iyi. >
< start="2227.77" dur="3.23"> Ndiri kuzova nani mudambudziko iri. >
< start="2231" dur="4.39"> Ndiri kuzosarudza, sarudzo yangu kufara. >
< start="2235.39" dur="3.41"> Zvakanaka, nhamba yechipiri, yechipiri R iko chikumbiro. >
< start="2238.8" dur="4.08"> Uye ikoko kukumbira Mwari huchenjeri. >
< start="2242.88" dur="3.29"> Izvi ndizvo zvaunoda kuita chero iwe uri munhamo. >
< start="2246.17" dur="2.39"> Unoda kukumbira Mwari huchenjeri. >
< start="2248.56" dur="2.1"> Svondo rapfuura, kana wakateerera kumharidzo yesvondo rapfuura, >
< start="2250.66" dur="2.72"> uye kana uchinge warikusha, dzokera online uye tarisa iwo meseji >
< start="2253.38" dur="5"> pakugadzira iyo kuburikidza nemupata wehutachiona pasina kutya. >
< start="2260.09" dur="2.15"> Sarudzo yako kuti ufare, >
< start="2262.24" dur="2.733"> asi wozobvunza Mwari njere. >
< start="2265.89" dur="2.13"> Uye iwe kukumbira kuna Mwari huchenjeri uye iwe unamate >
< start="2268.02" dur="1.51"> uye iwe unonamata nezvematambudziko ako. >
< start="2269.53" dur="2.99"> Ndima yechinomwe inotaura izvi munaJakobho wani. >
< start="2272.52" dur="4.83"> Kana muchirongwa ichi chero wako asingazive kusangana >
< start="2277.35" dur="4.05"> chero dambudziko, iri kunze kweshanduro yePhillips. >
< start="2281.4" dur="2.24"> Kana muchirongwa chero chipi zvacho chako asingazive kusangana >
< start="2283.64" dur="3.44"> chero dambudziko ripi neripi raunongofanira kubvunza kuna Mwari >
< start="2287.08" dur="2.65"> uyo anopa zvikuru kuvanhu vese >
< start="2289.73" dur="2.6"> pasina kuvaita kuti vanzwe vaine mhosva. >
< start="2292.33" dur="3.45"> Uye iwe unogona kuve nechokwadi chekuti huchenjeri hunodiwa >
< start="2295.78" dur="1.963"> uchapihwa. >
< start="2298.65" dur="2.18"> Ivo vanoti nei pazvinhu zvese ndaizokumbira huchenjeri >
< start="2300.83" dur="1.35"> pakati pechinetso? >
< start="2303.29" dur="2.07"> Saka iwe dzidza kubva mazviri. >
< start="2305.36" dur="1.57"> Saka iwe unogona kudzidza kubva padambudziko, >
< start="2306.93" dur="1.48"> ndosaka uchibvunza huchenjeri. >
< start="2308.41" dur="4.26"> Zvinonyanya kubatsira kana ukazomira kubvunza kuti nei, >
< start="2312.67" dur="3.04"> nei izvi zvichiitika, uye tanga kubvunza kuti chii, >
< start="2315.71" dur="1.45"> unoda kuti ndidzidze chii? >
< start="2318.09" dur="1.92"> Unoda kuti ndive chii? >
< start="2320.01" dur="2.27"> Ndingakura sei kubva pane izvi? >
< start="2322.28" dur="2.17"> Ndingaite sei kuti ndive mukadzi ari nani? >
< start="2324.45" dur="4.51"> Ndingaite sei kuti ndive murume ari nani kubudikidza nedambudziko iri? >
< start="2328.96" dur="1.32"> Ehe, ndiri kuedzwa. >
< start="2330.28" dur="1.53"> Ini handisi kuzonetseka kuti nei. >
< start="2331.81" dur="1.71"> Nei zvisingaite hazvo. >
< start="2333.52" dur="3.77"> Chii chakakosha chii, ndiri chii ndichave, >
< start="2337.29" dur="3.7"> uye chii chandiri kudzidza kubva pane izvi? >
< start="2340.99" dur="2.71"> Uye kuti uite izvozvo, iwe unofanirwa kukumbira huchenjeri. >
< start="2343.7" dur="2.56"> Saka iye anoti pese paunoda huchenjeri, bvunza Mwari chete, >
< start="2346.26" dur="1.61"> Mwari vanozokupa iwe. >
< start="2347.87" dur="2.2"> Saka unoti, Mwari, ini ndinoda huchenjeri samai. >
< start="2350.07" dur="3.23"> Vana vangu vari kuzogara kumusha kwemwedzi unotevera. >
< start="2353.3" dur="2.22"> Ini ndinoda huchenjeri sababa. >
< start="2355.52" dur="3.48"> Ini ndinotungamira sei kana mabasa edu ari munjodzi >
< start="2359" dur="1.553"> uye handikwanise kushanda izvozvi? >
< start="2362.05" dur="1.45"> Bvunza Mwari huchenjeri. >
< start="2363.5" dur="1.84"> Usabvunze nei, asi bvunza chii. >
< start="2365.34" dur="2.99"> Saka chekutanga iwe unofara, iwe unowana hunhu hwakanaka >
< start="2368.33" dur="3.14"> wekutaura kuti ndiri kuzotenda Mwari kwete nedambudziko, >
< start="2371.47" dur="3.14"> asi ndiri kuzotenda Mwari padambudziko. >
< start="2374.61" dur="2.92"> Nekuti zvakanaka zvaMwari kunyangwe hupenyu hwakamira. >
< start="2377.53" dur="2.137"> Ndosaka ndiri kudana aya akateedzana >
< start="2379.667" dur="5"> "Kutenda Kwechokwadi Kunoshanda Kana Hupenyu Husina." >
< start="2385.41" dur="1.473"> Kana hupenyu husina kushanda. >
< start="2387.96" dur="1.69"> Saka ndinofara uye ndinokumbira. >
< start="2389.65" dur="4.32"> Chinhu chechitatu chinonzi naJames kuita kuita zororo. >
< start="2393.97" dur="4.83"> Ehe, kungo rira kunze, usazvitorere >
< start="2398.8" dur="3.86"> zvese mumurwi wemitsipa. >
< start="2402.66" dur="2.64"> Usaore mwoyo zvakanyanya kuti hapana chaungaite. >
< start="2405.3" dur="1.33"> Usanetseka nezveramangwana. >
< start="2406.63" dur="2.83"> Mwari vanoti ndichakuchengeta, vimba neni. >
< start="2409.46" dur="2.42"> Iwe unovimba kuna Mwari kuti uzive zvakanakira. >
< start="2411.88" dur="2.17"> Unobatana naye. >
< start="2414.05" dur="4.84"> Iwe haupfupi-kutenderera mamiriro auri kuenda mairi. >
< start="2418.89" dur="3.07"> Asi iwe chingoti, Mwari, ini ndiri kuzorora. >
< start="2421.96" dur="2.28"> Handisi kusava nechokwadi. >
< start="2424.24" dur="1.87"> Handisi kusava nechokwadi. >
< start="2426.11" dur="2.76"> Ndiri kuzokuvimba mune aya mamiriro. >
< start="2428.87" dur="3.15"> Ndima yechisere ndiyo vhesi yekupedzisira yatiri kutarisa. >
< start="2432.02" dur="1.26"> Zvakanaka, isu tichatarisa imwezve muminiti. >
< start="2433.28" dur="5"> Asi ndima yechisere inoti, asi iwe unofanirwa kukumbira nokutendeka >
< start="2438.9" dur="2.49"> pasina kusahadzika kwekuvanzika. >
< start="2441.39" dur="1.86"> Chii chauri kukumbira mukutenda kwechokwadi? >
< start="2443.25" dur="1.57"> Bvunza huchenjeri. >
< start="2444.82" dur="2.07"> Uye uti, Mwari, ini ndinoda huchenjeri, uye ndinokutendai >
< start="2446.89" dur="1.26"> uri kuzondipa huchenjeri. >
< start="2448.15" dur="2.89"> Ndatenda, mave kundipa huchenjeri. >
< start="2451.04" dur="3.06"> Usafambire kunze, usakahadzika, >
< start="2454.1" dur="2.57"> asi chibvisei kuna Mwari. >
< start="2456.67" dur="5"> Munoziva, Bhaibheri rinodaro, pakutanga pandakataura >
< start="2461.67" dur="3.24"> kuti zvakataura izvi akawanda marudzi matambudziko. >
< start="2464.91" dur="1.8"> Iwe unoziva, tinotaura pamusoro pevakakomberedzwa, >
< start="2466.71" dur="2.23"> akawanda, akawanda marudzi ematambudziko. >
< start="2468.94" dur="2.81"> Iro izwi muchiGreek, marudzi mazhinji edambudziko, >
< start="2471.75" dur="3.11"> ndiro izwi rimwe chete iro rakafukidzwa muna 1 Petro >
< start="2474.86" dur="1.97"> chitsauko chechina, vhesi ina rakadaro >
< start="2476.83" dur="4.11"> Mwari vane marudzi mazhinji enyasha ekukupa. >
< start="2480.94" dur="3.35"> Mhando zhinji dzaMwari dzenyasha. >
< start="2484.29" dur="5"> Ndiyo yakafanana yakavhenganiswa, yakagadzirwa zvakasiyana, sedhaimani. >
< start="2489.339" dur="1.694"> Ari kuti chii ikoko? >
< start="2492.28" dur="2.08"> Pamatambudziko ese aunawo, >
< start="2494.36" dur="2.87"> pane nyasha kubva kuna Mwari dziripo. >
< start="2497.23" dur="5"> Kune ese marudzi mazhinji emuyedzo nedambudziko >
< start="2502.74" dur="4.5"> uye kuoma, kune mhando yenyasha nengoni >
< start="2507.24" dur="2.25"> uye simba iro Mwari anoda kukupa >
< start="2509.49" dur="2.05"> kuenzanisa iro dambudziko chairo. >
< start="2511.54" dur="2.04"> Unoda nyasha dzeizvi, unoda nyasha dze izvo, >
< start="2513.58" dur="1"> unoda nyasha dzeizvi. >
< start="2514.58" dur="3.76"> Mwari vanoti Nyasha dzangu dzakawanda >
< start="2518.34" dur="1.99"> nematambudziko auri kusangana nawo. >
< start="2520.33" dur="1.27"> Saka ndiri kuti chii? >
< start="2521.6" dur="1.74"> Ndiri kuti matambudziko ese ari muhupenyu hwako, >
< start="2523.34" dur="2.44"> kusanganisira dambudziko iri reCOVID, >
< start="2525.78" dur="4.03"> Dhiyabhorosi zvinoreva kukukunda iwe nematambudziko aya. >
< start="2529.81" dur="4.41"> Asi Mwari anoreva kukudziridza iwe kubudikidza nematambudziko aya. >
< start="2534.22" dur="3.543"> Anoda kukurira, satani, asi Mwari arikuda kukudziridza. >
< start="2539.44" dur="2.12"> Zvino, matambudziko anouya muhupenyu hwako >
< start="2541.56" dur="3.34"> hazviite kuti uve munhu uri nani. >
< start="2544.9" dur="2.51"> Vazhinji vanhu vanova vanovava vanhu kubva 'em. >
< start="2547.41" dur="3.28"> Hazvingoite kuti uve munhu ari nani. >
< start="2550.69" dur="2.96"> Iwo mafungiro ako ndiwo anoita mutsauko. >
< start="2553.65" dur="2.86"> Ndipo pandinoda kukupa chimwe chinhu kuti iwe urangarira. >
< start="2556.51" dur="3.07"> Nhamba yechina, chinhu chechina chekuyeuka >
< start="2559.58" dur="3.75"> paunenge uchisangana nematambudziko ndiko kuyeuka >
< start="2563.33" dur="1.99"> zvipikirwa zvaMwari. >
< start="2565.32" dur="1.84"> Rangarira zvipikirwa zvaMwari. >
< start="2567.16" dur="1.28"> Izvo zviri pasi mundima 12. >
< start="2568.44" dur="1.52"> Rega ndikuverengere ichi chipikirwa. >
< start="2569.96" dur="2.363"> James chitsauko chimwe, vhesi 12. >
< start="2573.55" dur="5"> Akaropafadzwa munhu anotsungirira mumuedzo, >
< start="2579.84" dur="2.67"> nekuti kana amira muedzo, >
< start="2582.51" dur="5"> achagamuchira korona yehupenyu yakavimbiswa naMwari, >
< start="2587.82" dur="2.75"> pane izwi, kune avo vanomuda. >
< start="2590.57" dur="0.833"> Rega ndiverenge zvakare. >
< start="2591.403" dur="2.057"> Ndinoda kuti iwe uzviteerere kwazvo. >
< start="2593.46" dur="5"> Akaropafadzwa munhu anotsungirira mumuedzo, >
< start="2598.84" dur="3.36"> Ndiani anogadzirisa matambudziko, >
< start="2602.2" dur="2.12"> semamiriro ezvinhu atiri izvozvi. >
< start="2604.32" dur="3.67"> Akaropafadzwa munhu anotsungirira, anotsungirira, >
< start="2607.99" dur="3.87"> Ndiani unotenda kuna Mwari, unoramba achitenda mukuedzwa, >
< start="2611.86" dur="3.12"> nekuti kana amira muedzo, unobuda >
< start="2614.98" dur="2.72"> kumashure, kutongwa uku hakusi kwekupedzisira. >
< start="2617.7" dur="1.4"> Pane magumo azvo. >
< start="2619.1" dur="2.07"> Uchabuda pane imwe mugumo wemugero. >
< start="2621.17" dur="4.41"> Iwe uchagamuchira korona yehupenyu. >
< start="2625.58" dur="3.38"> Zvakanaka, ini handitomboziva zvese izvo zvinoreva, asi zvakanaka. >
< start="2628.96" dur="2.7"> Korona yehupenyu yakavimbiswa naMwari >
< start="2631.66" dur="2.373"> kune vanomuda. >
< start="2635.73" dur="2.32"> Sarudzo yako kuti ufare. >
< start="2638.05" dur="2.92"> Chisarudzo chako kuvimba nehungwaru dzaMwari >
< start="2640.97" dur="1.72"> pane kusava nechokwadi. >
< start="2642.69" dur="4.21"> Kumbira Mwari huchenjeri kuti akubatsire kubva pamamiriro ako ezvinhu. >
< start="2646.9" dur="3.23"> Uye kumbira kuna Mwari kuti rutendo rutsungirire. >
< start="2650.13" dur="2.27"> Uye uti, Mwari, ini handisi kuzorega. >
< start="2652.4" dur="1.793"> Izvi zvichapfuurawo. >
< start="2655.329" dur="2.111"> Mumwe munhu akambobvunzwa, chii chaunofarira >
< start="2657.44" dur="0.833"> ndima yeBhaibheri? >
< start="2658.273" dur="1.297"> Vati, zvakaitika. >
< start="2659.57" dur="1.273"> Uye saka nei uchida iyo vhesi? >
< start="2660.843" dur="2.687"> Nekuti kana matambudziko auya, ndoziva kuti havana kuuya kuzogara. >
< start="2663.53" dur="1.194"> Vakazoitika. >
< start="2665.84" dur="2.88"> Uye ichokwadi mune aya mamiriro ezvinhu. >
< start="2668.72" dur="3.983"> Izvo hazvisi kuuya kuzogara, zviri kuitika. >
< start="2673.56" dur="2.24"> Zvino, ini ndinoda padyo nepfungwa idzi. >
< start="2675.8" dur="3.77"> Dambudziko haringori matambudziko. >
< start="2679.57" dur="3.23"> Izvo zvinowanzovazivisa, zvinowanzovazivisa. >
< start="2682.8" dur="4.563"> Dambudziko iri rinogona kuburitsa mamwe macheka muwanano yako. >
< start="2688.77" dur="2.76"> Dambudziko iri rinogona kuburitsa mamwe maroke >
< start="2691.53" dur="1.823"> muhukama hwako kuna Mwari. >
< start="2694.26" dur="5"> Dambudziko iri rinogona kuburitsa humwe hunhu mumararamiro ako, >
< start="2699.29" dur="2.593"> kuti uri munzira uchizvimanikidza iwe zvakanyanyisa. >
< start="2702.949" dur="3.181"> Uye saka tendera kuti Mwari vataure kwauri >
< start="2706.13" dur="5"> nezve izvo zvinoda kuchinja muhupenyu hwako, zvakanaka? >
< start="2711.45" dur="1.7"> Ndinoda kuti mufunge nezve vhiki rino, >
< start="2713.15" dur="3.44"> uye rega ini ndikupe mamwe matanho anoshanda, zvakanaka? >
< start="2716.59" dur="2.47"> Matanho anoshanda, nhamba yekutanga, ini ndinoda iwe >
< start="2719.06" dur="5"> kukurudzira mumwe munhu kuti vateerere meseji iyi. >
< start="2724.55" dur="1.25"> Iwe uchazviita here? >
< start="2725.8" dur="3.603"> Iwe uchapfuudza iyi link uye wotumira kune shamwari? >
< start="2729.403" dur="3.337"> Kana izvi zvakukurudzira, zvipfuure, >
< start="2732.74" dur="2.3"> uye uve unokurudzira vhiki rino. >
< start="2735.04" dur="4.84"> Wese munhu akakukomberedza anoda kukurudziro panguva yeKutambudzika uku. >
< start="2739.88" dur="1.779"> Saka tumira 'em kiungo. >
< start="2741.659" dur="5"> Vhiki mbiri dzakapfuura patakanga tine chechi mumamisasa edu, >
< start="2747.52" dur="3.11"> paLake Forest uye nemamwe mamwe makompasi edu eSaddleback, >
< start="2750.63" dur="3.53"> vanhu vanosvika zviuru makumi matatu vakazviratidza kuchechi. >
< start="2754.16" dur="4.14"> Asi vhiki ino yekupedzisira apo taifanira kumisa masevhisi >
< start="2758.3" dur="1.87"> uye isu tese taifanira kuona pamhepo, ini ndokuti, >
< start="2760.17" dur="3.38"> munhu wese enda kuboka rako diki unokoka vavakidzani vako >
< start="2763.55" dur="2.94"> uye koka shamwari dzako kuboka rako diki, >
< start="2766.49" dur="0.95"> taive nezviuru gumi nezvisere >
< start="2767.44" dur="5"> ISPs dzedzimba dzedu dzakabatana muvhisi. >
< start="2776.3" dur="3.41"> Izvi zvinoreva kuti pamwe hafu yemiriyoni >
< start="2779.71" dur="1.96"> yakatarisa meseji yesvondo rapfuura. >
< start="2781.67" dur="3.04"> Hafu yemiriyoni kana kupfuura. >
< start="2784.71" dur="3.63"> Sei, nekuti wakaudza mumwe munhu kuti vatarise. >
< start="2788.34" dur="4.56"> Uye ndinoda kukurudzira kuti uve chapupu chemashoko akanaka >
< start="2792.9" dur="2.79"> vhiki rino munyika inoda chaizvo nhau dzakanaka. >
< start="2795.69" dur="1.4"> Vanhu vanofanirwa kunzwa izvi. >
< start="2797.09" dur="1.18"> Tumira chinongedzo. >
< start="2798.27" dur="5"> Ndinotenda isu tinogona kukurudzira vanhu vane miriyoni vhiki ino >
< start="2803.29" dur="3.8"> kana isu tese tikapfuudza meseji, zvakanaka? >
< start="2807.09" dur="3.16"> Nhamba yechipiri, kana iwe uri muboka diki, hatisi gonna >
< start="2810.25" dur="3.45"> kukwanisa kusangana, kanenge mwedzi uno, ndizvozvo. >
< start="2813.7" dur="3.95"> Uye saka ndinokukurudzira kuti utange musangano wakasarudzika. >
< start="2817.65" dur="1.79"> Unogona kuva neboka repamhepo. >
< start="2819.44" dur="0.97"> Unoita sei iwe? >
< start="2820.41" dur="2.63"> Zvakanaka, pane zvigadzirwa kunze uko seZoom. >
< start="2823.04" dur="2.52"> Iwe unoda kutarisa kuti kunze, Zoom, ndeye mahara. >
< start="2825.56" dur="2.56"> Uye iwe unogona kusvika ipapo ndokuudza munhu wese kuti atore Zoom >
< start="2828.12" dur="1.74"> pafoni yavo kana pakombuta yavo, >
< start="2829.86" dur="3.58"> uye unogona kubatanidza vanhu vatanhatu kana vasere kana gumi, >
< start="2833.44" dur="3.15"> uye iwe unogona kuve neboka rako vhiki ino paZoom. >
< start="2836.59" dur="3.19"> Uye iwe unogona kuona mumwe nemumwe chiso, se Facebook Live, >
< start="2839.78" dur="2.933"> kana zvakaita sevamwe, munoziva, >
< start="2844.84" dur="5"> chii chiri pa iPhone kana uchitarisa paFaceTime. >
< start="2850.12" dur="1.82"> Zvakanaka, iwe haugone kuzviita neboka guru, >
< start="2851.94" dur="2.39"> asi unogona kuzviita nemunhu mumwe. >
< start="2854.33" dur="3.52"> Uye saka kurudzirana kutarisana kumeso kuburikidza nehunyanzvi. >
< start="2857.85" dur="2.66"> Isu tine ikozvino tekinoroji iyo yakanga isingawanikwe. >
< start="2860.51" dur="3.59"> Saka tarisa Zoom yeboka revaridzi boka. >
< start="2864.1" dur="1.17"> Uye chaizvo pano online >
< start="2865.27" dur="1.85"> iwe unogona kuwana rumwe ruzivo, zvakare. >
< start="2867.12" dur="3.244"> Nhamba yechitatu, kana usiri muboka diki, >
< start="2870.364" dur="4.096"> Ini ndichakubatsira iwe kuti uve muboka reInternet vhiki ino, ndicha. >
< start="2874.46" dur="2.33"> Zvese zvaunoda kuita is Email me, >
< start="2880.015" dur="4.815"> PastorRick @ saddleback, izwi-rimwe, SADDLEBack, >
< start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, uye ini ndichaita kuti iwe ubatanidzwe >
< start="2887.64" dur="2.57"> kuboka repamhepo, zvakanaka? >
< start="2890.21" dur="2.79"> Wobva waita chokwadi kana iwe uri chikamu cheSaddleback Church >
< start="2893" dur="2.84"> kuverenga tsamba yako yezuva nezuva yandiri kutumira >
< start="2895.84" dur="2.03"> zuva nezuva panguva yekutambudzika uku. >
< start="2897.87" dur="2.1"> Inonzi "Saddleback kumba." >
< start="2899.97" dur="3.5"> Iyo ine matipi, ine meseji inokurudzira, >
< start="2903.47" dur="2.14"> ine nhau dzaunogona kushandisa. >
< start="2905.61" dur="1.56"> Chinhu chinoshanda. >
< start="2907.17" dur="2.17"> Tinoda kugara tichikutana newe mazuva ese. >
< start="2909.34" dur="1.32"> Tora "Saddleback kumba." >
< start="2910.66" dur="2.69"> Kana ndisina email yako kero. >
< start="2913.35" dur="1.42"> saka hausi kuitora. >
< start="2914.77" dur="2.46"> Uye iwe unogona kunditumira email yako email kero >
< start="2917.23" dur="4.41"> kuna PastorRick@saddleback.com, uye ini ndichaisa iwe pane zvinyorwa, >
< start="2921.64" dur="2.37"> uye iwe unowana kubatana kwezuva nezuva, >
< start="2924.01" dur="3.76"> iyo yemazuva ese "Saddleback muImba" tsamba yepamhepo. >
< start="2927.77" dur="2.09"> Ini ndinongoda padhuze ndisati ndanamata >
< start="2929.86" dur="2.15"> nekutaura zvakare kuti ndinokuda sei. >
< start="2932.01" dur="1.72"> Ndanga ndichikunyengetererai mazuva ese, >
< start="2933.73" dur="1.9"> uye ndiri kuzoramba ndichikunyengeterera iwe. >
< start="2935.63" dur="2.68"> Tichapfuura izvi pamwechete. >
< start="2938.31" dur="2.33"> Uku hakusi kupera kwenyaya. >
< start="2940.64" dur="3.4"> Mwari achiri pachigaro chake, uye Mwari ari kushandisa izvi >
< start="2944.04" dur="4.16"> kukurisa kutenda kwako, kuunza vanhu pakutenda. >
< start="2948.2" dur="1.8"> Uye ndiani anoziva chii chichaitika. >
< start="2950" dur="3.07"> Tinogona kuve nerumutsiriro rwemweya kubva pane izvi zvese >
< start="2953.07" dur="2.66"> nekuti vanhu kazhinji vanotendeukira kuna Mwari >
< start="2955.73" dur="1.87"> pavanenge vari munguva yakaoma. >
< start="2957.6" dur="1.09"> Rega ndikunamatire. >
< start="2958.69" dur="1.66"> Baba ndinoda kukutendai kune wese munhu >
< start="2960.35" dur="1.48"> ndiani arikuteerera izvozvi. >
< start="2961.83" dur="5"> Ngatiraramei meseji yaJakobho chitsauko chekutanga, >
< start="2967.39" dur="2.78"> mavhesi matanhatu kana manomwe. >
< start="2970.17" dur="4.25"> Ngatidzidzei kuti matambudziko anouya, anozoitika, >
< start="2974.42" dur="5"> Ivo vakasiyana, ivo vane chinangwa, uye kuti iwe uri gonna >
< start="2979.81" dur="2.41"> vashandise zvakanaka muhupenyu hwedu kana tichivimba newe. >
< start="2982.22" dur="1.49"> Tibatsirei kusava nechokwadi. >
< start="2983.71" dur="4"> Ndibatsireiwo kufara, kukumbira, Ishe, >
< start="2987.71" dur="3.53"> uye kurangarira zvipikirwa zvako. >
< start="2991.24" dur="3.45"> Uye ndinonamatira munhu wese kuti vave nevhiki ine hutano. >
< start="2994.69" dur="2.87"> Muzita raJesu, ameni. >
< start="2997.56" dur="1.07"> Mwari vakuropafadze, munhu wese. >
< start="2998.63" dur="1.823"> Pfuudza izvi pane mumwe munhu. >